သတင်းလိုက်နေသော ဂျာနယ်လစ်များ | Surveillance Self-Defense
သတင်းအချက်အလက် ရယူနိုင်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လုံခြုံစွာလှုပ်ရှားခြင်း
ဂျာနယ်လစ်တွေဟာ ခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မလိုအပ်တဲ့ စွန့်စားမှုတွေကိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကတဆင့် မိမိအပေါ်ကျလောက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ အခြားသူတွေနဲ့ လုံခြုံတဲ့ဆက်ဆံရေးအစီအမံတွေနဲ့ အွန်လိုင်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မိမိ၏အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းခြင်း
ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး VPN ကိုရွေးချယ်ခြင်း
macOS ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးပြုသူများအတွက် အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာဖျက်နည်းလမ်းညွှန်
လမ်းညွှန် - Windows စနစ်တွင် အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာဖျက်ခြင်း
Linux ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးပြုသူများအတွက် အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာဖျက်နည်းလမ်းညွှန်
အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို အန္တရာယ်အရပ်ရပ်ကနေ အချိန်ပြည့်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပြီး လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေး ဆိုတာတစ်ခါလုပ်ရုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျအစီအစဉ်ချပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်။ သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အတွက်အသုံးတည့်မယ့် လုံခြုံရေးအစီအစဉ် တစ်ရပ် ရေးဆွဲနိုင်မှာပါ။ လုံခြုံရေးဆိုတာ နည်းပညာတွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ သုံးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကိုယ် ဘယ်လိုခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရသလဲ၊ ဘယ်လိုတန်ပြန်ကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာ အချက်အလက်ကာကွယ်ဖို့ ထားရှိတဲ့အစီအမံတွေ ယို့ယွင်းအားနည်းသွားစေ နိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ခြိမ်းခြောက်မှု လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို တန်ပြန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘာကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုလဲ၊ ဘယ်သူ့ရန်ကနေ ကာကွယ်ရမှာလဲဆိုတာတွေကို ဆန်းစစ်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှု နမူနာပုံစံ တွက်ချက်ခြင်း လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်မှာ မိမိရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်တွေ ကာကွယ်ဖို့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ် ဘယ်လိုရေးဆွဲ ရမလဲဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရွေးချယ် ရမလဲ ဆိုတာတွေ သင်ကြားပေးမှာပါ။
ဒါဆို လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တူသလဲ။ ဥပမာ မိမိနေအိမ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ချင် တယ်ဆိုပါစို့။ အရင်ဆုံးမေးစရာမေးခွန်းတစ်ချို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာ ကာကွယ်ဖို့လိုတဲ့ ဘာအရေးကြီးပစ္စည်းတွေရှိသလဲ။
မိမိရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ထဲမှာ လက်ဝတ်လက်စား၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတို့ ပါနိုင်ပါတယ်။
အနှောင့်အယှက်ပေးလိုသူတွေဟာ သူခိုးသူဝှက်တွေ၊ မိမိနဲ့အတူနေ အခန်းဖော်တွေ၊ အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အမှန်တကယ်ကာကွယ်ဖို့လိုနိုင်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖောက်ထွင်းမှုပေါများသလား။ ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့ အခန်းဖော်တွေ၊ အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ ဘယ်လောက်ယုံကြည်ရသလဲ။ ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သူတွေမှာ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလဲ။ ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကြိုတင်စဉ်းစားထား သင့်သလဲ။
ကြိုးစားမှုတွေမအောင်မြင်ရင် ဘယ်လောက်ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရှိလာနိုင်သလဲ။
အိမ်မှာ ပြန်အစားမထိုးနိုင်တဲ့အရာတွေ ရှိသလား။ အဲဒီအရာတွေကို ပြန်အစားထိုးဖို့ အချိန်နဲ့ ငွေကြေး ရှိသလား။ အိမ်ကအခိုးခံရတဲ့အရာတွေကို ပြန်လျော်ပေးဖို့ အာမခံထားထားသလား။
ဒီအကျိုးဆက်တွေ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ ဒုက္ခခံပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလဲ။
အရေးကြီးတဲ့၊ အပြင်ကိုပေါက်ကြားမခံနိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကာကွယ်ဖို့ မီးခံသေတ္တာ ဝယ်ယူ ချင်သလား။ သော့ခလောက် ကောင်းကောင်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သလား။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေ ထည့်ထားဖို့ ဘဏ်မှာ မီးခံသေတ္တာဖွင့်ဖို့ အချိန်ရှိသေးသလား။
ဒီမေးခွန်းတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်လိုအစီအမံတွေထားမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ဆန်းစစ် လို့ရလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်မှာ တန်ဖိုးကြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အိမ်ဖောက်ထွင်းခံရနိုင်ခြေ နည်းရင် ဈေးကြီးပေးပြီး သော့ခလောက်ဝယ်ဖို့ လိုချင်မှလိုပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်ထွင်းခံရနိုင်ခြေမြင့်တယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးကွက်ထဲက အကောင်းဆုံးသော့ခလောက်ကို ဝယ်တပ်ရုံသာမက လုံခြုံရေးစနစ်ပါတပ်ဆင်ဖို့ စဉ်းစားသင့် ပါတယ်။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရင် ကိုယ်ဘယ်လိုခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတာ နားလည်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အင်အားတွေ၊ အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေတွေကို ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ် ဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲ။ ဘယ်ကစရမလဲ။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရင် ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာ ဘာအန္တရာယ်တွေရှိသလဲ၊ ဘယ်သူ့ ရန်က နေကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေ သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ရေးဆွဲတဲ့အခါ အောက်ကမေးခွန်း ၅ ခုကို ဖြေကြည့်ပါ။
၂။ ဘယ်သူ့ရန်ကနေ ကာကွယ်ရမလဲ။
၃။ ကြိုးစားမှုတွေမအောင်မြင်ရင် ဘယ်လောက်ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရှိလာနိုင်သလဲ။
၄။ အမှန်တကယ်ကာကွယ်ဖို့ လိုနိုင်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
၅။ ဒီအကျိုးဆက်တွေ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ ဒုက္ခခံပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလဲ။
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း ဆိုတာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားပြီး ကာကွယ်လိုတဲ့အရာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် လုံခြုံ ရေးနယ်ပယ်မှာတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းဆိုတာ သတင်းအချက်အလက်တစ်မျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိတယ်။ ဥပမာ အီးမေးလ်တွေ၊ ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သူစာရင်းတွေ၊ ချက်ချင်းပို့စာစနစ်နဲ့ ပို့တဲ့စာတွေ၊ ဘယ်မှာရှိနေလဲ ဆိုတဲ့အချက်အလက်နဲ့ ဖိုင်တွေ အားလုံးဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ စက်ပစ္စည်း (ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း စသည်ဖြင့်) တွေဟာလည်း ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းထဲမှာ ပါနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကို စာရင်းလုပ်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ သိမ်းထားတဲ့ နေရာတွေ၊ ဘယ်သူတွေက အဝင်အထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်သူတွေဝင်လို့မရအောင် ဘယ်လို တားဆီးထားသလဲဆိုတာတွေ ထည့်ရေးပါ။
ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်သူတွေက ပစ်မှတ်ထားချင်မလဲ ဆိုတာ အရင်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကို ခြိမ်းခြောက် နိုင်တဲ့ လူနဲ့အဖွဲ့တွေကို အနှောင့်အယှက် လို့ခေါ်ပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်၊ အရင်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ လက်တွဲဖော်၊ စီးပွားပြိုင်ဘက်၊ အစိုးရနဲ့ အများသုံးကွန်ယက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ hacker စသည်ဖြင့် ပါနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သူစာရင်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကို ရယူလိုသူ စာရင်း ပြုစုပါ။ အဲဒီစာရင်းမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အစိုးရအေဂျင်စီ၊ ကော်ပိုရေးရှင်း စသည်ဖြင့် မျိုးစုံပါနိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးရင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး အဲဒီစာရင်း ကို ဖျက်ဆီးသင့်ရင် ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
အနှောင့်အယှက်တွေက အချက်အလက်တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်မှုတွေကို ကွန်ယက်ကနေဖြတ်သွားချိန်မှာ ခိုးဖတ်တာမျိုး၊ အချက်အလက်တွေ ပျက်စီးသွားအောင် လုပ်တာမျိုးတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
အနှောင့်အယှက်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိနိုင်သလို အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းများစွာလည်းရှိပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်နေတာကို ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် အစိုးရက အဲဒီဗီဒီယို လူထုကြား မပြန့်သွား အောင် ဗီဒီယိုကို လိုက်ဖျက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုရရှိနိုင်မှု လျှော့ချတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် အနှောင့်အယှက်က နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တစ်ယောက် ဖြစ်နေရင်တော့ မိမိရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားပြီး ကိုယ်မသိအောင် လျှောက်ဖြန့်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ချမှတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အနှောင့်အယှက်က ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ရသွားရင် ဘယ်လောက်ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေနဲ့ ကြုံရမလဲ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကိုဆန်းစစ်ဖို့ ကိုယ့်အနှောင့် အယှက်မှာ လုပ်နိုင် စွမ်းရည် ဘယ်လောက်ရှိလည်း ကြည့်ပါ။ ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုရင် ကိုယ်ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအားလုံးရှိပါလိမ့်မယ်။ အများသုံး Wi-Fi လိုင်းပေါ်က hacker ဆိုရင်တော့ ကုဒ်နဲ့မပြောင်းထားတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကို ခိုးဝင်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ ဆိုရင်တော့ လုပ်နိုင်စွမ်းက ပိုတောင်များပါလိမ့်မယ်။
အနှောင့်အယှက်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေရသွားရင် ဘယ်လိုအသုံးချနိုင် တယ်ဆိုတာကို ချရေးပါ။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်မှာ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ် လာ နိုင်ခြေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါဟာ အနှောင့်အယှက်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်နဲ့ ယှဉ်တွဲနေတာပါ။ ကိုယ့်ကို မိုဘိုင်းဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ကိုယ့်ဒေတာအားလုံး ရယူနိုင်စွမ်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အဲဒီအချက်အလက်တွေကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီး ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင်လုပ်နိုင်ခြေ တော်တော်နည်းပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကို ခွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်နေတဲ့အဆောက်အအုံ ပြိုကျသွား နိုင်လားဆို ပြိုကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြေငလျင်ခဏခဏလှုပ်တဲ့ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုလိုမြို့မှာ ငလျင်လှုပ်တာ မရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့ စတော့ဟုန်းလိုမြို့ထက် အမှန်တကယ်ပြိုကျနိုင်ခြေ အများကြီး ပိုများပါတယ်။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်တာဟာ အားလုံးအတွက် တစ်ပုံစံတည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တွေးခေါ်ပုံပေါ် အများကြီမူတည်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများအတွက် တစ်ချို့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေဟာ နစ်နာမှုအရမ်းကြီးတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ကိုဖြစ်ဖြစ် လက်မခံနိုင်တာမျိုး ရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေများပေမယ့်လည်း ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုကို ပြဿနာကြီး တစ်ခုလို့မမြင်တာကြောင့် ဂရုမစိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားရမလဲဆိုတာ ချရေးပါ။ ဖြစ်တာ အရမ်း ရှားတယ်၊ ထိခိုက်နစ်နာမှု နည်းတယ် (သိုမဟုတ် ပြန်လည်ခုခံဖို့ အလွန်ခက်ခဲတယ်) ဆိုတာတွေကြောင့် စိတ်ပူစရာမလိုဘူးထင်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုလည်း ချရေးပါ။
ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေ တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ ဒုက္ခခံပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလဲ။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လုံခြုံရေးအစီအမံဆိုတာမရှိပါဘူး။ လူအားလုံးမှာ ဦးစားပေးတဲ့အရာတွေ၊ စိတ်ပူတဲ့အရာတွေ၊ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရင်းမြစ်အင်အားတွေ မတူကြပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် သုံးစွဲရအဆင်ပြေမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှု အားလုံးမျှတဲ့ အစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ကြိုတင်ဆန်းစစ် သင့်ပါတယ်။
ဥပမာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှုလိုက်နေတဲ့ရှေ့နေ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မပေါက်ကြားအောင် အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပါလိမ့်မယ် (ဥပမာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားတဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ ဆက်သွယ်တာမျိုး)။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ဗီဒီယိုတွေကို ရီစရာအနေနဲ့ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေဆီ အီးမေးလ်နဲ့လျှောက်ဖြန့်ဖို့ဆိုရင်တော့ လုံခြုံရေးကို အဲဒီလောက်ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုလောက်ပါဘူး။
ကိုယ့်အပေါ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို လျှော့ချဖို့ ဘာနည်းလမ်းတွေ လက်လှမ်းမီသလဲ ချရေးပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ငွေကြေး၊ နည်းပညာ၊ လူမှုရေးရာ အကန့်အသတ်တွေကိုပါ ထည့်ပေးပါ။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းကို ပုံမှန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်း
အခြေအနေပြောင်းသွားတာနဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်လည်း လိုက်ပြောင်းဖို့လိုနိုင်တာကို သတိပြုပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိမိရဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကို မကြာခဏပြန်သုံးသပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းကို ကျင့်သုံးပါ။
ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လုံခြုံရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲပါ။ ပြီးရင် နောက်ဘယ်တော့ ပြန်သုံးသပ်မလဲ ဆိုတာကို ပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာ ရက်စွဲမှတ်ထားပါ။ ဒါမှပဲ ကိုယ့်အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မိမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီသေးလားဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။
အင်တာနက်နဲ့ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းသုံး ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်တွေကြောင့် လူတစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက်ကြား ဆက်သွယ်ရတာ အရင်ကထက်အများကြီးအဆင်ပြေလာပါတယ်။ ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာဘဲ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုလည်း ပိုများလာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာလုံခြုံမှုကို အလေးအနက်ထားပြီး မကာကွယ်ဘူးဆိုရင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စာတိုပေးပို့မှု၊ အီးမေးလ်၊ ချက်ချင်းပို့စာတို၊ ဗီဒီယိုနဲ့အသံသုံး အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၊ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က စာဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို ကြားဖြတ်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့အန္တရာယ် အကြီးကြီးရှိနေပါတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါက်ကြားမှုအနည်းဆုံးနည်းလမ်းက ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ မသုံးဘဲ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောလို့မရနိုင်တာကြောင့် ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေသုံးပြီး ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ အလုံခြုံဆုံးဖြစ်စေဖို့ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ တဲ့နည်းလမ်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ် အသုံးပြုရင် မူလပို့တဲ့သူ (“အစ”) ကပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှို့ဝှက်စာဖြစ်သွားအောင် ကုဒ်နဲ့ပြောင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ယက်ကိုဖြတ်သွားတဲ့တစ်လျှောက် လျှို့ဝှက် စာအနေနဲ့ပဲရှိနေပြီး နောက်ဆုံးစာလက်ခံရရှိသူ (“အဆုံး”) လက်ထဲရောက်မှသာ ကုဒ်နဲ့ပြန်ဖြည်ပြီးဖတ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်က အများသုံးလိုင်းကို စောင့်ကြည့်နေသူတွေ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ စာပို့ဖို့ သုံးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ app တွေအပါအဝင် ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကို ကြားကခိုးပြီး “နားထောင်” လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုဘဲ ဖုန်းကနေ စာပေးပို့ဖို့သုံးတဲ့ app တွေ၊ ကိုယ်သတင်းအချက်အလက် အသုံးပြုတဲ့ website တွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုမှာပါတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်ဟာ ခိုင်မာတဲ့ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု စနစ်တစ်ခုရဲ့ ပင်မလက္ခဏာပါ။ စနစ်ကို ရေးဆွဲဖန်တီးသူ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ကုဒ်ကိုချိုးဖောက်လို့ မရပါဘူး။
SSD ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ လမ်းညွှန်တင်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာအားလုံးမှာ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း စနစ်ကို သုံးကြပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို ဘယ်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းမှာဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အသံနဲ့ ဗီဒီယို သုံးပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊ စာတို့ပေးပို့ဆက်သွယ်တာ၊ အီးမေးလ်ပို့တာတွေအားလုံးကို အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတာ လုပ်လို့ရပါတယ်။
(အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်ဟာ သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်တွင်ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် နဲ့မတူပါဘူး။ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်နဲ့ စာပို့လိုက်ရင် ကိုယ်နဲ့စာလက်ခံမယ့်သူအကြား လမ်းတောက်လျှောက် စာမပေါက်ကြားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ပစ္စည်းနဲ့ app ရဲ့ ဆာဗာကြား၊ app ဆာဗာနဲ့ လက်ခံသူရဲ့ စက်ပစ္စည်းကြား စာဖြတ်သန်းတဲ့ အချိန်မှာပဲ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြားထဲက စာပို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ ကိုယ်တက်ကြည့် နေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ အသုံးပြုနေတဲ့ app တွေက ကုဒ်နဲ့မပြောင်းလဲထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စာတွေကို ရယူဖတ်ရှု နိုင်ပါလိမ့်မယ်။)
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဥပမာ အခိကို နဲ့ ဘောရစ်(စ်) ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကြား အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်သုံးပြီး ဆက်သွယ်ချင်တယ် ဆိုပါစို့။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ စကားဝှက်သော့လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက် အပိုင်းအစတွေ ရှိထားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစနစ်သုံးပြီးပေးပို့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လူတိုင်းဖတ်လို့မရဘဲ သက်ဆိုင်ရာ စကားဝှက်သော့ ပိုင်ဆိုင်သူတွေပဲ ဖတ်လို့ရအောင် စနစ်ကပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ အခိကိုက ဘောရစ်(စ်)ကို စာမပို့ခင် ဘောရစ်(စ်) ရဲ့စကားဝှက်သော့နဲ့ပဲ ပြန်ဖြည် ဖတ်လို့ရအောင် စာကိုကုဒ်နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီကုဒ်နဲ့ ပြောင်းထားတဲ့စာကို အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် ပို့လိုက်မယ်။ ဒါဆို သူတို့နှစ်ယောက် ဆက်သွယ်တာ ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေဟာ စာပို့ဖို့သုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုထဲကို ဖောက်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိရင်တောင် (ဥပမာ အခိကိုရဲ့ အီးမေးလ် အကောင့်) ကုဒ်နဲ့ပြောင်းထားတဲ့စာကိုပဲ တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီစာကို ဖတ်ကြည့်လို့နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘောရစ်(စ်) ဆီစာရောက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့စကားဝှက်သော့ကိုသုံးပြီး စာကိုပြန်ဖြည်ပြီးမှ ဖတ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
Google Hangout လိုမျိုး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ချို့က “ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု” အသုံးပြုတယ်လို့ ကြော်ငြာပေမယ့် သူတို့အသုံးပြုတဲ့ စကားဝှက်သော့တွေက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကိုယ်တိုင်က ထိန်းချုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ သော့တွေဖြစ်လို့ စာပေးပို့သူနှင့်လက်ခံရရှိသူ နှစ်ဦးသာသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေမဟုတ်ကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီစနစ်တွေဟာ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် မဟုတ်ကြပါ။ အပြည့်အဝလုံခြုံမှုရှိဖို့ဆိုရင် ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရဲ့ အစနဲ့အဆုံးနှစ်နေရာမှာ ရှိတဲ့သူတွေပဲ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ ဖို့နဲ့ ပြန်ဖြည်ဖို့ စကားဝှက် သော့တွေ ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကပါ စကားဝှက်သော့တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင် အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်တွင်ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်မှာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ စကားဝှက်သော့တွေကို တစ်ခြားသူတွေ ပေးသိလို့ မရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကုဒ်ပြောင်းဖို့နဲ့ ကုဒ်ပြန်ဖြည်ဖို့သော့တွေကို တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်တာ သေချာအောင် စစ်ဆေးရပါမယ်။ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်သုံးတာ အလုပ်နည်းနည်း ပိုနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဒီစနစ်သုံးတဲ့ app ကို ကိုယ့်စက်ပစ္စည်းပေါ် ကူးဆွဲတာကစလို့ သော့ပိုင်ဆိုင်မှု အတည်ပြုတာ တွေလုပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းက ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်းတွေကို အားကိုးစရာ မလိုဘဲ သုံးစွဲသူတွေ ကိုယ်တိုင် မိမိလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍သိရှိရန်အချက်များ ၊ ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာပင်မသဘောတရားများ ၊ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားများ တို့မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်နိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အများသုံးစကားဝှက်သော့ဖြင့် ကုဒ်ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းအသေးစိတ်ကို အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်အသေးစိတ်လေ့လာချက် မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ စာတိုပေးပို့မှုများနှင့် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားသော စာပေးပို့မှု နည်းလမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
ကြိုးဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ ဖုန်းခေါ်ရင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို အစအဆုံး ကုဒ်နဲ့မပြောင်းထားပါဘူး။ ဖုန်းကတစ်ဆင့် စာတိုပေးပို့တဲ့ (SMS လို့လည်း လူသိများတယ်) စနစ်မှာလည်း စာကိုကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတာ မလုပ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာ အစိုးရကဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းကုမ္ပဏီကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ ကဖြစ်ဖြစ် စာကိုကြားဖြတ်ယူတာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုတာကို အသံဖမ်းထားတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ချက် အရ အစိုးရက ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှာ စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုရင် ဖုန်းခေါ်တာ၊ SMS နဲ့ စာတိုပေးပို့တာမျိုး မလုပ်ဘဲ အင်တာနက်ကနေ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုနည်းလမ်းသုံးပြီး ဆက်သွယ် ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအများစုမှာ ဗီဒီယိုနဲ့ဆက်သွယ်တာတောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်အသုံးပြုပြီး စာပို့တာ၊ အသံနဲ့ဗီဒီယိုသုံးပြီး ဖုန်းခေါ်တာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဆော့ဖ်ဝဲအချို့ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆစ်ဂနဲလ် (iOS နဲ့ Android နှစ်မျိုးလုံးအတွက်)
WhatsApp ((iOS နဲ့ Android နှစ်မျိုးလုံးအတွက်)
အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ် တစ်ပါတည်းမပါပါဘူး။
Facebook Messenger နဲ့ Telegram တို့လို ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ် ပါရှိပေမယ့် ဒီစနစ်ကို တမင်တကာဖွင့်ပြီးမှ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ iMessage လိုမျိုး ဝန်ဆောင်မှုမှာတော့ သုံးစွဲသူ နှစ်ဖက်စလုံးက စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်း သုံးမှသာ (iMessage အတွက်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံး iPhone သုံးမှ ရမှာပါ) အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို သုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်။
မိမိအသုံးပြုသော စာပေးပို့မှုဝန်ဆောင်မှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်ဟာ မိမိကို အစိုးရ၊ hacker တွေနဲ့ စာပို့ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတွေရဲ့ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖွဲ့တွေက ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲမှာ ကိုယ်မသိအောင် အပြောင်းအလဲတွေခိုးလုပ်လို့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲ အချက်အလက် တွေကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းတာ ရပ်သွားအောင်၊ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု အားနည်းသွားအောင် လုပ်တာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် EFF လို အဖွဲ့အစည်းတွေက လူသုံးများတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ (Facebook ကပိုင်တဲ့ WhatsApp ၊ ဆစ်ဂနဲ စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ) အမှန်တကယ် အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် သုံး၊ မသုံးဆိုတာကို စောင့်ကြည့် အကဲခတ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အနေနဲ့ မလုံခြုံမှာကို စိုးရိမ်မှုရှိသေးတယ်ဆိုရင် စာသယ်ယူ ပို့ဆောင်တဲ့စနစ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ အများပြည်သူ လက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း နည်းလမ်းတွေ သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ OTR နဲ့ PGP တို့လို စနစ်မျိုးကို သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစနစ်တွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းပညာတွေ မသုံးဘဲ ပိုပြီးရှေးကျတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ သုံးလေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို အားထားတဲ့စနစ်တွေဖြစ်လို့ အသုံးပြုရခက်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်တမ်းမဲ့စနစ် (OTR) ဆိုတာ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ စာတိုပေးပို့ဖို့ ချက်ချင်းပို့ စာစနစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ ထည့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ OTR ပါဝင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Pidgin (Windows သို့မဟုတ် Linux စနစ်များအတွက်)
Adium (macOS စနစ်အတွက်)
Jitsi (Linux ၊ Windows ၊ macOs စနစ်အားလုံးအတွက်)
PGP (သို့မဟုတ် တော်တော်ကောင်းသည့်လွတ်လပ်လုံခြုံမှု) ဆိုတာကတော့ အီးမေးလ်တွေမှာ အစအဆုံး ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့ စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ PGP ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်ကို အီးမေးလ်မှာ ဘယ်လို တပ်ဆင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို အောက်က လင့်ခ်တွေမှာဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
PGP ကို macOS တွင်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
PGP ကို Windows တွင်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
PGP ကို Linux တွင်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
အီးမေးလ်မှာ PGP သုံးတာဟာ နည်းပညာပိုင်း ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ အကန့်အသတ်တွေရှိတာကြောင့် အဲဒါတွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူအချင်းချင်းသာ ဆက်သွယ်ဖို့ အသုံးပြုရင် ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်တွင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များ
အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုစနစ်မှာ ဆက်သွယ်ပေးပို့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မဖွက်ထားပေးနိုင်ပါဘူး။ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်အကြောင်းရှင်းပြသည့်အချက်အလက်များ ကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာ အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်၊ ဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့တယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို လျှို့ဝှက်ပေးမထားနိုင်ပါဘူး။ တယ်လီဖုန်းကနေ ဖုန်းခေါ်တယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဘယ်ကနေခေါ်နေလဲဆိုတဲ့ တည်နေရာက အချက်အလက်အကြောင်းရှင်းပြတဲ့ အချက် အလက် ဖြစ်တဲ့အတွက် လျှို့ဝှက်မထားနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ပေးပို့တဲ့၊ လက်ခံရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှို့ဝှက်ထားနိုင်တာနဲ့ ရာနှုန်းပြည့်မလုံခြုံပါဘူး။ အချက် အလက်အကြောင်းရှင်းပြတဲ့အချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ၊ ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတွေ ပေါက်ကြားစေနိုင်ပါတယ်။
အောက်က ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ ဥပမာမှာဆိုရင် အချက်အလက်အကြောင်းရှင်းပြတဲ့အချက်အလက်တွေမှာ ဘယ်သူမှမသိသင့်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ ပါနေပါတယ်။
ဘာကိစ္စတွေပြောလဲ မသိရင်တောင် ကိုယ်က ပြည့်တန်ဆာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဆီ ည ၂ နာရီ ၂၄ မိနစ်မှာ ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီး ၁၈ မိနစ်ကြာဖုန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သိရှိနိုင်တယ်။
ဘာကိစ္စတွေပြောလဲ မသိရင်တောင် ဂိုးဒင်းဂိတ်တံတားကနေ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတားဆီးရေး အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်တယ်။
ဘာကိစ္စတွေပြောလဲ မသိရင်တောင် HIV စစ်ဆေးပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ မိမိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံကုမ္ပဏီတွေဆီကို အချိန်တစ်နာရီထဲမှာ ဖုန်းဆက်တိုက်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်တယ်။
ဘာကိစ္စတွေပြောလဲဆိုတာကို အစိုးရက ထောက်လှမ်းလို့မရရင်တောင် ကိုယ့်ဆီကို ဒေသဆိုင်ရာ အမျိုးသားရိုင်ဖယ်အသင်းချုပ်က လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်နေချိန်မှာ ဖုန်းခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖုန်းချပြီးပြီးချင်း ကိုယ်ကသက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီ ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိနိုင်တယ်။
ဘာကိစ္စတွေပြောလဲ မသိရင်တောင် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ထံဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီး နာရီဝက်ကြာ စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းမှာ မိသားစုမျိုးဆက်ပွားစီမံရေးရုံးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိနိုင်တယ်။
လုံခြုံစွာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဖို့ဆိုရင် အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း ဟာ အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ခြင်းစနစ်ဟာ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အစိုးရတွေက ကိုယ့်စာတွေကို ကြားဖြတ်ရယူတဲ့ ရန်ကကာကွယ်ဖို့ အလွန်အသုံး တည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများအတွက် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အစိုးရတွေက အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှု တွေမဟုတ်တတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အစအဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုစနစ်ဟာ အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဥပမာ လူတစ်ယောက်က မိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိဘ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ကိုယ့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှာကို စိုးရိမ်နိုင်တယ်။ ဤအခြေအနေမျိုးမှာ ကြာရှည်မခံဘဲ ခဏနေရင်ပျောက်သွားတဲ့ “ခြေရာဖျောက်” စာတိုများပေးပို့နိုင်စွမ်းဟာ စာပေးပို့မှုစနစ်ရွေးချယ်ရာမှာ အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေဟာ မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခြားသူတွေဆီပြန့်သွားမှာကို စိုးရိမ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မချိတ်ထားတဲ့အမည်ဝှက်ကို အသုံးပြုနိုင်စွမ်းက အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဘယ်လုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း ရွေးသုံးမလဲဆိုတာအတွက် လုံခြုံရေးနှင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တွေကပဲ အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ app ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ မသုံးဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်ပါဘူး။ လူသုံးများတဲ့ app တွေဟာ နိုင်ငံအလိုက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ စာပေးပို့မှု ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ ဝန်ဆောင်မှုညံ့ဖျင်းတာ၊ ပိုက်ဆံပေးသုံးရတာတွေကြောင့် တစ်ချို့သူတွေအတွက် အသုံးမတည့်ပါဘူး။
ကိုယ့်အနေနဲ့ လုံခြုံတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကနေ ဘယ်လိုရလာဒ်တွေ ရလိုသလဲ သေသေချာချာ နားလည်တော့မှ များပြားရှုပ်ထွေးပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ခေတ်မမှီတော့တဲ့၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ နည်းပညာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ စမတ်ဖုန်း၊ laptop သို့မဟုတ် tablet တစ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် အချက်အလက် အမြောက်အများကို တစ်ချိန်လုံး ကိုယ်နဲ့တစ်ပါတည်း သယ်ယူနေရာရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး မိမိနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ စသည်ဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါတယ် (လူပေါင်းများစွာရဲ့ ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေ ပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက် မသက်ဆိုင်သူများ မသိရှိအောင် လျှို့ဝှက်ထားရမယ့် ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်)။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သိမ်းဆည်းသယ်ယူတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဟာ အလွန်များပြားပြီး အခြားသူများ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ရယူနိုင်တဲ့အတွက် လုံခြုံအောင်ထားဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါ တယ်။
ဥပမာ စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ချိန်မှာ သိမ်းယူခံရနိုင်သလို လမ်းသွား နေရင်း လုယူခြင်း၊ အိမ်မှခိုးယူခံရခြင်းများ တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို အချက်အလက်တွေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း မှာပင် အလွယ်တကူ ကူးယူသွားခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို စကားဝှက်များ၊ ပင် (PIN) နံပါတ်များ၊ လက်အမူအရာများသုံး၍ ပိတ်ထားခြင်းဟာလည်း စက်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခံရမယ်ဆိုရင် ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ စက်ပစ္စည်းထဲမှာ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ ဖတ်ယူနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့အတွက် စက်ပစ္စည်း lock ချ ပိတ်ထားတာကို အလွယ်တကူ ရှောင်သွားလို့ရပါတယ်။ အနှောင့်အယှက် တစ်ဦးအနေနဲ့ အချက်အလက် သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ စကားဝှက် ကိုသိစရာမလိုဘဲ အချက်အလက်တွေကို ကူးယူခြင်း၊ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းတွေ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင် ကိုယ့်အချက်အလက်တွေကို အပြင်မှာ (အွန်လိုင်းပေါ်မှ တိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်) လက်တွေ့ခိုးယူချင်တဲ့သူတွေ အခက်တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းအချို့ ကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းတဲ့နည်း အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကုဒ်ပြန်ဖြည်ပြီး အချက်အလက်တွေကို ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် အနှောင့်အယှက် တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ပစ္စည်းရော စကားဝှက် ရော နှစ်မျိုးစလုံးလိုမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုင်တွဲ တစ်ချို့သာမဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်အားလုံးကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားခြင်းဟာ အလုံခြုံဆုံးဖြစ်တယ်။ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာအများစုမှာ disk တစ်ခုလုံး အလုံးစုံ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ ရှိတတ်ပါ တယ်။
စမတ်ဖုန်းနဲ့ tablet များအတွက်
Android စနစ်မှာဆိုရင် နောက်ပိုင်းထွက်ရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူပြီး စတင်အသုံးပြုချိန်မှာ အလုံးစုံ ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖို့ နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာမှ ဒီနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုချင် တယ်ဆိုရင် စက်အားလုံးမှာရှိတဲ့ “လုံခြုံမှု” “Security” setting အောက်မှာ သွားပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
iPhone ၊ iPad စတဲ့ Apple စက်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်တော့ “အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း” (Data Protection) ဆိုပြီး ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး စကားဝှက်အသစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဒီနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ macOS မှာတော့ FileVault လို့ခေါ်တဲ့ အလုံးစုံကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်း တစ်ပါတည်း ပါရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Linux distributions တွေကတော့ အများအားဖြင့် စနစ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်လည်ပတ်တဲ့ အချိန်မှာ အလုံးစုံ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ရွေးချယ်မှုပေးပါတယ်။
Windows မှာ Vista သို့မဟုတ် ယင်းနောက်ထွက်တဲ့စနစ်တွေမှာ BitLocker လို့ခေါ်တဲ့ အလုံးစုံ ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲမှု နည်းလမ်း ပါရှိပါတယ်။
BitLocker ရဲ့ကုဒ်က အများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့မရတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ပစစ်ဆေးသူ တွေအနေနဲ့ စနစ်ဘယ်လောက်လုံခြုံမှုရှိလဲဆိုတာ တိတိကျကျသိဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် BitLocker သုံးမယ်ဆိုရင် Microsoft ရဲ့အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမှုစနစ်ဟာ လုံခြုံမှုရှိပြီး ဟာကွက်မရှိဘူးလို့ Microsoft ကို ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ Windows စနစ်ကို အသုံးပြုနေပြီဆိုရင်တော့ Microsoft ကို အတန်အသင့် ယုံကြည်တယ် လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows သို့မဟုတ် BitLocker ရဲ့ အကာအကွယ်စနစ်တွေကို ကျော်ဝင်နိုင်မယ့် နောက်ဖေးပေါက်လို အားနည်းချက်တွေကို သိထားသူတွေက မိမိကိုထောက်လှမ်းနိုင်မှာ စိုးရိမ် တယ်ဆိုရင် အခြား ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်ကို သုံးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ GNU/Linux သို့မဟုတ် BSD စတဲ့ အများသုံးနိုင်တဲ့ open-source ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်၊ အထူးသဖြင့် Tails၊ Qubes OS စတဲ့ လုံခြုံရေး တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ version တစ်ခု ရွေးသုံးသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ရင်လည်း Windows မှာပါတဲ့ BitLocker မဟုတ်ဘဲ Veracrypt လိုမျိုး အခြားကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်တစ်ခုသုံးပြီး ကွန်ပျူတာ hard drive ကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားနိုင်ပါတယ်။
သတိထားဖို့က မည်သည့်ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုနည်းလမ်း အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ စကားဝှက်ခိုင်လုံမှသာ ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲမှုစနစ်ဟာ လုံခြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့စက်ပစ္စည်းကို အနှောင့်အယှက်တစ်ယောက်က ရသွားပြီဆိုရင် စကားဝှက်ဘာလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ခိုင်မာပြီး မှတ်ရလွယ်တဲ့ စကားဝှက် ဖန်တီးဖို့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အံစာတုံးလှိမ့်ပြီး စကားလုံးစာရင်း ထဲကနေ စကားလုံး တွေကို ကျပန်းရွေးချယ်သွားခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံးတွေကို ပေါင်းပြီးတော့ “ဝှက်စာကြောင်း” ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ “ဝှက်စာကြောင်း” ဆိုတာ ပိုမိုလုံခြုံစေဖို့အတွက် စကားလုံးတစ်လုံး ထက်ပိုရှည်တဲ့ စကားဝှက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Disk တစ်ခုလုံး ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံးစကား လုံး ခြောက်လုံးသုံးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ခိုင်ခံ့သောစကားဝှက်များဖန်တီးထားရှိခြင်း ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်မှာ အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါ။
စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်မှာ ရှည်လျားတဲ့ဝှက်စာကြောင်းကို အမြဲရိုက်ထည့်ဖို့ မှတ်သား ထားဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုဟာ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် ရယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသုံးဝင်သော်လည်း အမှန်တကယ် လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဖို့ဆိုရင် အနှောင့်အယှက်တွေက စက်ပစ္စည်းကို လက်ဝယ်ရယူခြင်း မပြုနိုင်စေရန် ဖွက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို ပိုမိုလုံခြုံတဲ့ စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာ ကာကွယ်ထားရှိသင့်ပါတယ်။
လုံခြုံတဲ့ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့် စကားဝှက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အမူအကျင့်များ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ အခြားစက်ပစ္စည်းတွေမှာသုံးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေပိုဆိုးလျှင် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်တွေ မတော်တဆပေါက်ကြားနေလား၊ မလုံခြုံသည့်နည်းလမ်းများအသုံးပြုနေသလား ဆိုတာကို အချိန်ပြည့် စိုးရိမ်နေရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ပြဿနာကို သိတယ်ဆိုရင်တောင် ဖြေရှင်းနည်းတွေကို အသုံးမချနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်သူတွေအနေနဲ့ မလုံခြုံတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံ ခြုံရေးအစီအမံတွေ အသုံးပြုနေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်အနှောင့်အယှက်တွေက ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟန်ဆောင်ပြီး သူခိုးဆော့ဖ်ဝဲ တွေ ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုယ်တိုင်က အီးမေးလ်နဲ့ စာတွဲ attachment တွေ ပို့ပြီး ဖွင့်ခိုင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက် တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကို ပိုပြီး လုံခြုံတဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာ ကန့်ပြီးအသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။ ဒီလုံခြုံတဲ့စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ဝှက် ထားရမည့် အချက်အလက်မူရင်းတွေကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ ပြီးရင် ဒီစက်ပစ္စည်းကို ရံဖန်ရံခါမှသာ အသုံးပြုပြီး အသုံးပြုနေချိန်မှာလည်း မိမိရဲ့ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အထူးသတိထား ဆောင်ရွက်ပါ။ အီမေးလ်မှ ပေးပို့ လာသော စာတွဲ attachment များ ဖွင့်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိသည့် ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းများကို အခြားစက်ပစ္စည်း တစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပါ။
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်ခု သီးသန့်ထားရှိအသုံးပြုဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက် ငွေကုန်ကြေးကျ များမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်အနည်းငယ်သာ တပ်ဆင်ထားပြီး ရံဖန်ရံခါမှသာ အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းမြန်ဖို့၊ သစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်တဲ့ netbook တစ်ခုလောက်ဆိုရင် ခေတ်မီ laptop သို့မဟုတ် ဖုန်းတွေထက် ဈေးအများကြီးသက်သာပါတယ်။ အရင်တုန်းကထုတ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုက Tails လိုမျိုး လုံခြုံတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေဟာ သူတို့နဲ့ပိုကိုက်ညီနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုက်နာ ရမယ့် ယေဘုယျအကြံပြုချက်အချို့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ပြီဆိုရင် နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ version နဲ့ အမြဲ update လုပ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Update တွေဟာ ကုဒ်အဟောင်းတွေမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ထုတ်ထားတာပါ။ တစ်ချို့ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်အဟောင်းတွေမှာတော့ လုံခြုံရေးအတွက် update လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာ သတိပြုပါ။
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ထားရှိတဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေကို လိုက်နာရမလဲ
၁။ မိမိရဲ့ စက်ပစ္စည်းကို လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားပြီး ဘယ်နေရာမှာသိမ်းထားလဲဆိုတာကို လျှို့ဝှက်ထားပါ။ သိမ်းထားတဲ့နေရာကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ခြေရာလက်ရာပျက်တာသိနိုင်မယ့် နေရာ တစ်ခု (ဥပမာ သော့ခတ်ထားတဲ့ ဗီဒို) မှာသိမ်းထားပါ။
၂။ ကွန်ပျူတာ hard drive ကို ခိုင်မာတဲ့ ဝှက်စာကြောင်း တစ်ခုသုံးပြီး ကုဒ်နဲ့ပြောင်းထားပါ။ ဒါဆို ကွန်ပျူတာ အခိုးခံရလျှင်တောင် ဝှက်စာကြောင်း မသိဘဲနဲ့ အထဲက အချက်အလက်တွေကို ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၃။ Tails လိုမျိုး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှု နဲ့ လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ် တပ်ဆင် အသုံးပြုပါ။ နေ့စဉ်အလုပ်မှာ အများသုံးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လျှို့ဝှက်ထားရမယ့် အီးမေးလ်များ ရေးသားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သိမ်ဆည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကနေ ချက်ချင်းပို့စာတို ပေးပို့ခြင်း တို့လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ Tails ကို ကောင်းကောင်း သုံးလို့ရပါတယ်။ လုံခြုံရေး security setting ကိုလည်း အမြင့်ဆုံးထားလို့ရပါတယ်။
၄။ စက်ပစ္စည်းကို offline ထားပါ (အင်တာနက်နှင့်မချိတ်ဆက်ထားပါနှင့်)။ အင်တာနက်မှ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ အွန်လိုင်းမှ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက အင်တာနက်နဲ့ ဘယ်သော အခါမှ မချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကို အနီးအနားက ကွန်ယက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Wifi နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ချိတ်ဆက်တာမလုပ်ဘဲ DVD သို့မဟုတ် USB drive စတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ဖိုင်တွေကို ကူးဆွဲတာ လုပ်ပါ။ ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာ ဒါကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အပြင်လူတွေအကြား “လေဟာနယ်” ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့အစီအမံတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အသုံးနည်းတဲ့အချက်အလက်အချို့ကို ကာကွယ် သိမ်းဆည်းချင်တယ် (ဥပမာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲရန် စကားဝှက်သော့၊ စကားဝှက်စာရင်း သို့မဟုတ် မိမိထံယုံကြည် အပ်နှံထားတဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မိတ္တူ စသည်ဖြင့်) ဆိုရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးတောင်သုံးဖို့မလိုဘဲ ဖွက်ထားလို့ရတဲ့ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှုစနစ်သုံးထားတဲ့ USB သော့ကို လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ ဖွက်ထားမယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်နဲ့မချိတ်ဘဲသုံးတာလိုမျိုး အသုံးတည့်နိုင်ပါတယ်။
၅။ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ်သုံးနေကျ အကောင့်တွေကို ဝင်မကြည့်ပါနဲ့။ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကို အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်သုံးတယ်ဆိုရင် အဲဒီစက်ပစ္စည်းကနေ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် သီးသန့်ဝက်ဘ် နဲ့ အီးမေးလ်အကောင့်တွေ ဖန်တီးထားပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေက ကိုယ့်ရဲ့ IP လိပ်စာ ကို ရှာမတွေ့နိုင်အောင် Tor အသုံးပြုပါ (Linux ၊ macOS ၊ Windows လမ်းညွှန်တွေမှာ ဖတ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်)။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာ လိုက်စုံစမ်းနေတယ် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကို ကြားဖြတ်ရယူနေတယ် ဆိုရင် အကောင့်အသစ်သီးသန့်ဖွင့်ပြီး Tor အသုံးပြုပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်သုံးတဲ့စက်ပစ္စည်းကနေ ကိုယ့်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မချိတ်မိအောင် ခြေရာဖျောက် ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ထားရမယ့် အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်း တစ်ခုသီးသန့်ထားရှိတာဟာ အနှောင့်အယှက်တွေရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို သူတို့ပစ်မှတ်ထားဖို့ နေရာ တစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင် တစ်ခုတည်းသော အချက်အလက်မူရင်းကို ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် လည်းရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ အနှောင့်အယှက် လိုချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ ပျက်စီးသွားစေဖို့ဆိုရင် ဘယ်လောက်လုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်စေ တစ်နေရာတည်းမှာ မသိမ်းထားပါနဲ့။ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားတဲ့ မိတ္တူတစ်ခုပွားထားပြီး တစ်ခြားတစ်နေရာမှာပါ သိမ်းထားပါ။
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းထားသလိုဘဲ လုံခြုံမှုလျော့နည်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းထားရှိခြင်းလည်း လုပ်နိုင် ပါတယ်။ လုံခြုံမှုလျော့နည်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းကို အန္တရာယ်များတဲ့နေရာ သွားတဲ့အခါ သို့မဟုတ် အန္တရာယ် များတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ သယ်ယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သတင်းထောက်များနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှား သူတွေဆို ရင် သူတို့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါသုံးဖို့ အခြေခံသုံးနိုင်တဲ့ netbook တစ်ခုသယ်သွားလေ့ရှိကြတယ်။ အဲဒီ ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ပုံမှန်အဆက်အသွယ်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ အီးမေးလ် အချက်အလက်တွေ ဘာမှမပါရှိပါဘူး။ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ကွန်ပျူတာသိမ်းဆည်းခံရတယ် ဆိုရင် ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်လည်း ဒီနည်းလမ်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စမတ်ဖုန်းသုံးတယ်ဆိုရင် ဈေးပေါပြီး လွှင့်ပစ်နိုင်သော သို့မဟုတ် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိသောဖုန်း ဝယ်ထားပြီး ခရီးသွားတဲ့ အခါမှာ သီးသန့်ဆက်သွယ်အသုံးပြုမှုတွေ လုပ်ဖို့ ထားနိုင်ပါတယ်။
စကားဝှက်မန်နေဂျာအသုံးပြုပြီး ခိုင်ခံ့တဲ့ စကားဝှက်များ ဖန်တီးခြင်း
ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေသုံးတဲ့အခါ အကောင့်ထဲဝင်ဖို့ စကားဝှက်ထားရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုထားတဲ့အခါ တစ်နေရာမှာသုံးထားတဲ့စကားဝှက်ကို နောက်တစ်နေရာမှာ ထပ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လုံခြုံရေးအတွက် အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်။ စကားဝှက်တွေတူနေရင် မိမိကိုအန္တရာယ်ပေးချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်က စကားဝှက်တစ်ခု ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ ဒီစကားဝှက်သုံးထားတဲ့ မိမိအကောင့်အားလုံးကို တန်းပြီးဝင်သွားလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကောင့်တစ်ခုစီအတွက် ခိုင်ခံ့ပြီး ထပ်တူမရှိတဲ့ စကားဝှက်တွေကို သီးသန့်ထားသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ စကားဝှက်မန်နေဂျာ ပရိုဂရမ်က များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ စကားဝှက်မန်နေဂျာဆိုတာ မိမိအသုံးပြုဖို့ စကားဝှက်တွေ ဖန်တီးပေးပြီး တစ်ခါတည်း မှတ်သားသိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်ကို ခေါ်တာပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ တစ်ခုစီမှာသုံးဖို့ မတူညီတဲ့စကားဝှက်များစွာကို ဖန်တီး သိမ်းဆည်းပေးတဲ့အတွက် မိမိအနေနဲ့ စကားဝှက်အားလုံးကို အလွတ်ကျက်မှတ်ထားဖို့ မလိုတော့ပါ။ စကားဝှက်မန်နေဂျာက အောက်ပါကိစ္စရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခြားသူတွေ မခန့်မှန်းနိုင်မယ့် ခိုင်ခံ့တဲ့ စကားဝှက်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း
စကားဝှက်များစွာကို လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်ခြင်း (လုံခြုံရေးမေးခွန်းများရဲ့ အဖြေတွေကို ပါ မှတ်သားသိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်ပါတယ်)
စကားဝှက်အားလုံးကို စကားဝှက်ကြီး (သို့မဟုတ် ဝှက်စာကြောင်း) တစ်ခုတည်းသုံးပြီး ကာကွယ်ပေး နိုင်ခြင်း
ဥပမာ KeePassXC ဆိုတာ အများအသုံးပြုနိုင်တဲ့ (open-source) အခမဲ့ စကားဝှက်မန်နေဂျာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ကို မိမိကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်မှာကူးဆွဲပြီးသုံးနိုင်သလို web browser နဲ့လည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KeePassXC ပရိုဂရမ်ကို ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုနေချိန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အလိုအလျောက် မသိမ်းဆည်းပေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပရိုဂရမ်မှာ စကားဝှက်အသစ် တစ်ခုဖြည့်ပြီးချင်း ပရိုဂရမ်ရုတ်တရက်ပိတ်သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီစကားဝှက်ကို ပြန်ရှာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် KeePassXC ရဲ့ setting ကနေ သွားရောက်ပြောင်းလဲထားနိုင်ပါတယ်။
မိမိအနေနဲ့ စကားဝှက်မန်နေဂျာသုံးသင့်၊ မသုံးသင့် စဉ်းစားနေပါသလား။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ အစိုးရတစ်ရပ် လိုမျိုး အင်အားကြီး အနှောင့်အယှက် တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးမပြုသင့်ပါ။
စကားဝှက်မန်နေဂျာသုံးရင် လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ဖို့ အကောင့်တစ်ခုချင်းစီကို ပစ်မှတ်ထားမယ့်အစား စကားဝှက်မန်နေဂျာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုတည်းကိုဘဲ ပစ်မှတ်ထားလို့ ရသွားမှာ ဖြစ်တယ်။
အနှောင့်အယှက်များအတွက် စကားဝှက်မန်နေဂျာတွေဟာ တိုက်ခိုက်ဖို့ထင်ရှားတဲ့ ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်တယ်။
သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ စကားဝှက်မန်နေဂျာတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး တိုက်ခိုက်လာမှာကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် နည်းပညာသိပ်မသုံးတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်သုံးမယ့်အစား ခိုင်ခံ့တဲ့စကားဝှက်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လည်း ဖန်တီးလို့ရပါတယ် (“ခိုင်ခံ့သောစကားဝှက်များဖန်တီးရာတွင် အံစာတုံးလှိမ့်သည့် နည်းလမ်း အသုံးပြုခြင်း” အပိုင်းကို အောက်မှာဆက်ဖတ်ပါ)။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စကားဝှက်တွေကို ချရေးထားပြီးတော့ မိမိကိုယ်ပေါ်မှာဘဲ လုံလုံခြုံခြုံဖွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စကားဝှက်ဆိုတာ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာကိုယ်မှတ်ထားပြီး ဘယ်တော့မှချမရေးရဘူးမဟုတ်လား။ စကားဝှက်တွေကို ချရေးပြီး ပိုက်ဆံအိတ်လိုမျိုး လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် စကားဝှက်စာရွက် ပျောက်သွားတယ်၊ အခိုးခံရတယ်ဆိုပါက ပျောက်သွားမှန်း၊ အခိုးခံမှန်း သိနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းက အသုံးဝင်ပါတယ်။
ခိုင်ခံ့သောစကားဝှက်များဖန်တီးရာတွင် အံစာတုံးလှိမ့်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်း
စကားဝှက်များစွာရှိတဲ့အထဲက တစ်ချို့စကားဝှက်တွေကို အလွန်ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့လုပ်ထားပြီး မဖြစ်မနေ အလွတ်ကျက် မှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးစကားဝှက်တွေမှာ
ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ စက်ပစ္စည်း (ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း စသည်ဖြင့်) ရဲ့ စကားဝှက်
ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲမှု အတွက်သုံးတဲ့ စကားဝှက်များ (အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း လိုမျိုး)
စကားဝှက်မန်နေဂျာ ကိုဝင်ဖို့ သုံးတဲ့ စကားဝှက်ကြီး သို့မဟုတ် ဝှက်စာကြောင်း
ကိုယ့်စကားဝှက်တွေကို တစ်ခြားသူတွေ မခန့်မှန်းနိုင်အောင်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ကျပန်းရွေးချယ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရမယ့် အမှန်တကယ်ကျပန်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်စွမ်း အားနည်းကြပါတယ်။ ဒါဆို ဝေါဟာရစာရင်း နဲ့ အံစာတုံး သုံးပြီး ခိုင်ခံ့ပြီးမှတ်မိလွယ်မယ့် စကားဝှက်တွေ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အံစာတုံးလှိမ့်ပြီး ဝေါဟာရစာရင်းထဲက စကားလုံးတွေကို ကျပန်းရွေးသွားပါ။ ရွေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါင်းလိုက်ရင် “ဝှက်စာကြောင်း” ရလာပါ လိမ့်မယ်။ “ဝှက်စာကြောင်း” ဆိုတာ စကားဝှက်တစ်လုံးတည်းကို စိတ်မချရင် ပိုပြီးလုံခြုံစေဖို့ ပိုမိုရှည်လျားတဲ့ စကားဝှက်တစ်မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Disk ကိုကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ စကားဝှက်မန်နေဂျာ ပရိုဂရမ်တွေအတွက် အနည်းဆုံး စကားလုံးခြောက်လုံး သုံးဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
ဘာကြောင့်အနည်းဆုံး စကားလုံးခြောက်လုံးသုံးသင့်သလဲ။ ဘာကြောင့်စာကြောင်းမှာသုံးဖို့ စကားလုံးတွေကို အံစာတုံးလှိမ့်ပြီး ရွေးတာလဲ။ စကားဝှက်တွေပိုရှည်လေလေ၊ ပိုပြီးကျပန်းဖြစ်လေလေ ကွန်ပျူတာနဲ့ လူသား နှစ်မျိုးစလုံးအနေနဲ့ စကားဝှက်ဘာလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရှည်လျားပြီး မှန်းရခက်တဲ့စကားဝှက်မျိုး သုံးသင့်သလဲဆိုတာသိချင်ရင် ဒီ ဗီဒီယိုရှင်းလင်းချက် မှာကြည့်ပါ။
အခု EFF ရဲ့ ဝေါဟာရစာရင်း ကိုသုံးပြီး ဝှက်စာကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရပြီး ထောက်လှမ်းရေး ဆော့ဖ်ဝဲ အတပ်ခံရတယ်ဆိုရင် အဲဒီထောက်လှမ်းရေးဆော့ဖ်ဝဲက ကိုယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စကားဝှက်ကြီး ကို ခိုးကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ စကားဝှက်ကြီးရသွားပြီဆိုရင် စကားဝှက်မန်နေဂျာထဲကိုဝင်ပြီး အထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ စကားဝှက်တွေကို ခိုးလို့ရသွားမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် စကားဝှက်မန်နေဂျာ သုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေမှာ သူခိုးဆော့ဖ်ဝဲ အတပ်မခံရအောင် သတိထားပါ။
“လုံခြုံရေးမေးခွန်းများ” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတိပြုရန်
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေဝင်မယ်ဆိုရင် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို အတည်ပြုဖို “လုံခြုံရေးမေးခွန်း” တွေဖြေရလေ့ ရှိပါတယ်။ သတိထားဖြေပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေမှန်တွေကို ပြင်ပမှာ အလွယ်တကူရှာဖွေသိရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် အနှောင့်အယှက် တွေက အဖြေမှန် စုံစမ်းရှာဖွေပြီး လုံခြုံရေးမေးခွန်းတွေမှာ သွားဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့် စကားဝှက် ကို ခိုးစရာတောင်လိုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အဖြေမှန်ဖြေဆိုမယ့်အစား ကိုယ်ကလွဲပြီး အခြားသူမသိနိုင်မယ့် အဖြေတွေကို လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး ဖြေပါ။ ဥပမာ လုံခြုံရေးမေးခွန်း က အောက်ပါမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုပါစို့။
“သင်၏ ပထမဆုံးသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမည်ကို ဖော်ပြပါ။”
အဖြေမှန်ဖြေရင် ကိုယ့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အမည်ဆိုတာ သိတဲ့သူအများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကားဝှက် မန်နေဂျာ သုံးပြီး ကျပန်းအဖြေတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ အဲဒီတမင်တကာလုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ အဖြေတွေကို စကားဝှက်မန်နေဂျာမှာဘဲ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
အရင်က လုံခြုံရေးမေးခွန်းဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပြီး မိမိအဖြေတွေကို ပြန်ပြောင်းဖို့ လုပ်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အကောင့်တစ်ခုစီဝင်ဖို့ သုံးတဲ့စကားဝှက်နဲ့ လုံခြုံရေး မေးခွန်းတွေ မထပ်အောင်ထားပါ။
မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများတွင် စကားဝှက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိသိမ်းဆည်းခြင်း
ကိုယ်က စက်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် စက်အားလုံးပေါ်မှာ စကားဝှက်တွေသိမ်းထားနိုင်အောင် စကားဝှက် မန်နေဂျာပရိုဂရမ်တွေက စကားဝှက်ချိန်ညှိသိမ်းဆည်းခြင်း နည်းလမ်းသုံးကြပါတယ်။ ဒါဆို စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ စကားဝှက်ဖိုင်တစ်ခုကို ချိန်ညှိလိုက်ရင် တစ်ခြားစက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်း စကားဝှက်တွေ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိသိမ်းဆည်းထားပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
စကားဝှက်မန်နေဂျာတွေက စကားဝှက်တွေကို အဝေးမှာရှိတဲ့ ဆာဗာဖြစ်တဲ့ “cloud ထဲမှာ” ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ ပြီး သိမ်းဆည်းပေးနိုင်တယ်။ စကားဝှက်တွေ သုံးဖို့လိုရင် မန်နေဂျာပရိုဂရမ်တွေက cloud ထဲကနေ ယူပေးပြီး အလိုလျောက် ကုဒ်ပြန်ဖြေပေးခြင်း လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စကားဝှက်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့၊ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိသိမ်းဆည်းဖို့ ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာအသုံးပြုတဲ့ စကားဝှက်မန်နေဂျာတွေက သုံးစွဲရ ပိုအဆင်ပြေပေမယ့်လည်း တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ပိုအားနည်းတတ်ပါတယ်။ စကားဝှက်တွေကို ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှာရော၊ cloud မှာရော နှစ်နေရာ သိမ်းထားရင် စကားဝှက်ခိုးချင်တဲ့ တိုက်ခိုက်သူက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကို ပစ်မှတ်ထား ဝင်ရောက်စီးနင်းဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ (ဒါပေမယ့် စကားဝှက်မန်နေဂျာ ကိုဝင်ဖို့ ဝှက်စာကြောင်း မသိဘဲတော့ လုံခြုံရေးချိုးဖောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါ။)
Cloud ကနေတစ်ဆင့် လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှာကို စိုးရိမ်ရင် စကားဝှက်တွေကို cloud ပေါ်ချိန်ညှိသိမ်းဆည်းတာ မလုပ်ဘဲ မိမိစက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဘဲ သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။
အရေးပေါ်သုံးလို့ရအောင် စကားဝှက်တွေစုထားတဲ့ database အပိုတစ်ခုထားပါ။ ကွန်ပျူတာရုတ်တရက် ပိတ်ကျသွားလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ပစ္စည်းအလုခံရလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သုံးနေကျ စကားဝှက် database ပျောက်သွားရင် အရန် database ရှိတာအသုံးဝင်ပါတယ်။ စကားဝှက်မန်နေဂျာတွေမှာ အရန်ဖိုင် ကူးထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိ တတ်သလို ကိုယ်သုံးနေကျ အရန်ဖိုင်ကူးတဲ့ ပရိုဂရမ်ရှိရင်လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
စစ်မှန်ကြောင်း အဆင့်ဆင့်အတည်ပြုခြင်းနှင့် တစ်ခါသုံးစကားဝှက်များ
ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးလိုသူတွေ အကောင့်ထဲအလွယ်တကူမဝင်နိုင်အောင် ခိုင်မာပြီးထပ်တူမရှိတဲ့ စကားဝှက် တွေထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အကောင့်တွေပိုလုံခြုံစေဖို့ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။
အချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းနည်းလမ်း (2FA ၊ စစ်မှန်ကြောင်း အဆင့်ဆင့်အတည်ပြုခြင်း၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် အတည်ပြုခြင်း လို့လည်းခေါ်ကြတယ်) သုံးကြပါတယ်။ ဒီ နည်းလမ်းသုံးရင် သုံးစွဲသူတွေဟာ အကောင့်ထဲဝင်ဖို့ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု (ပထမ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် စကားဝှက် နဲ့ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်း) ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းဟာ တစ်ခါသုံး လျှို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်နိုင် သလို ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှ ထုတ်ပေးတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း ကို မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်။
ပထမနည်းလမ်းကတော့ ဖုန်းပေါ်မှာ လုံခြုံရေးကုဒ်နံပါတ်ထုတ်ပေးတဲ့ စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း ပရိုဂရမ် (Google Authenticator သို့မဟုတ် Authy စသည်ဖြင့်) တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဖုန်းမဟုတ်ဘဲ ကုဒ်ထုတ်ပေးတဲ့ သီးသန့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခု သုံးခြင်း (YubiKey စသည်ဖြင့်) ဖြစ်ပြီး
ဒုတိယနည်းလမ်းအနေနဲ့ အကောင့်တစ်ခုကိုဝင်ချိန်မှာ သုံးနေကျစကားဝှက်အပြင် ထပ်ဆောင်း လုံခြုံရေးကုဒ်နံပါတ်တစ်ခု အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုံခြုံရေးကုဒ်နံပါတ်အသစ်ကို အကောင့် ဝန်ဆောင်မှုက SMS စာတိုသုံးပြီး မိမိထံ ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် SMS စာတိုနဲ့ ကုဒ်နံပါတ် ပို့ပေးခြင်းထက် စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် သီးသန့်စက်ပစ္စည်း အသုံးပြုခြင်း နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းဆီကို ပို့ထားတဲ့ကုဒ်တွေကို တိုက်ခိုက်သူက လမ်းကြောင်းလွှဲပြီး ကြားဖြတ်ရယူတာက စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းပရိုဂရမ်ကို ချိုးဖျက်ရ တာထက် ပိုလွယ်ပါတယ်။
Google လိုမျိုး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ချို့ကတော့ တစ်ခါသုံးစကားဝှက်တွေကို စာရင်းလိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစကားဝှက်စာရင်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ ကူးရေးထားပြီး ကိုယ်နဲ့တစ်ပါတည်းဆောင်ထားရမှာပါ။ စကားဝှက် တစ်ခုချင်းစီကို တစ်ခါဘဲ သုံးလို့ရတာကြောင့် ကိုယ်စာရိုက်ထည့်နေချိန်မှာ စကားဝှက်ကို သူခိုးဆော့ဖ်ဝဲသုံးပြီး ခိုးကြည့်နေရင်တောင် အဲဒီစကားဝှက်သုံးပြီး အကောင့်ထဲဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့သောအချိန်များတွင် မိမိ၏စကားဝှက်များကို ဖွင့်ဟ၍ ထုတ်ပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
စကားဝှက်ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေဟာ နေရာဒေသအလိုက် ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာ တွေမှာ စကားဝှက်တောင်းတာကို ငြင်းဆိုဖို့ တရားရေးအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဥပဒေတွေမှာ တော့ အစိုးရက စကားဝှက်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဌာန်းထားပြီး စကားဝှက် သို့မဟုတ် စကားဝှက်သော့ တစ်ခု ကို သိထားတယ်လို့ သံသယရှိရုံနဲ့ ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချပိုင်ခွင့်တောင် ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေအရမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ခြိမ်းခြောက်ပြီး စကားဝှက်ထုတ်ပေးဖို့ ဖိအားပေးတာမျိုးလည်း ကြုံရနိုင်သလို နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ချိန်မှာ စကားဝှက်မထုတ်ပေးရင်၊ စက်ပစ္စည်းကိုဖွင့်ပေးဖို့ ငြင်းရင် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ တားဆီး ထိန်းသိမ်းတာ၊ စက်ပစ္စည်းသိမ်းသွားတာတွေ ခံရနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့/မှ ခရီးသွားမယ့်သူတွေအတွက် စက်ပစ္စည်းဖွင့်ပေးဖို့ ပြောတာကြုံရရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် မှာ သီးသန့်ဖတ် ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခြားအခြေအနေတွေမှာလည်း စကားဝှက် အတင်းအကြပ် တောင်းတာကြုံရင် ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာတွေ ကြိုစဉ်းစားထားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
VPN ရဲ့ အရှည်က Virtual Private Network ဖြစ်ပါတယ်။ VPN ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရင် ကိုယ်ပေးပို့တဲ့ အချက် အလက် အားလုံးဟာ (ဥပမာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သုံးရင် ဆာဗာတွေထံ ဝင်ခွင့်တောင်းရတာမျိုး) ကိုယ့် ISP ဆီက မဟုတ်ဘဲ VPN ဆီကနေလာတဲ့ ပုံပေါ်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက် မှုအတွက် အရေးကြီးအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုယ့် IP လိပ်စာ ကို ဖုံးထားပေးနိုင်ပါတယ်။ IP လိပ်စာဟာ ကိုယ်ဘယ်နေမှာ ရှိနေသလဲဆိုတာကို ယေဘူယျဖော်ပြနိုင်တာကြောင့် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ သိသာပေါ် လွင်စေနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ VPN အသုံးပြုခြင်း
ကိုယ်ရဲ့အင်တာနက်ပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စူးစမ်းသူတွေမသိရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်၊ လေဆိပ်၊ စာကြည့်တိုက် စတဲ့အများပြည်သူသုံး နေရာတွေက မလုံခြုံတဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုရင် VPN ကိုပိုအသုံးပြုသင့်ပါ တယ်။
ကွန်ယက်ပေါ်မှာ အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အသုံးမပြုနိုင်အောင် ပိတ်ဆို့ထား တာရှိရင် ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က ကျောင်းကွန်ယက်ကနေ အင်တာနက်သုံးနေတာမျိုး၊ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အင်တာနက်သုံးပြီး အလုပ်လုပ်တာမျိုးဆို အသုံးဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် VPN အသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒကွဲနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။
ကုမ္ပဏီတွင်းကွန်ယက် intranet နဲ့ ဘယ်နေရာကနေမဆို ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားခရီး သွားနေချိန်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာနေရင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမတက်နိုင်တဲ့ အခြားအချိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးရဲ့ intranet ကိုဝင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။
လူအများ အမှတ်မှားတတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုက VPN တွေကို ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာသာ သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်လည်း ကိုယ်မသိတဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်တွေနဲ့ လှမ်းချိတ်မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ ကချိတ်သလိုဘဲ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကုမ္ပဏီနဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP) တို့ အကြား သတင်းအချက်အလက်အသွားအလာတွေကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ နိုင်အောင် ဖုန်းမှာလည်း VPN သုံးသင့်ပါတယ်။
VPN နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အားလုံးအဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု လိုဘဲ VPN ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း မြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် အသုံးအဝင်ဆုံးဖြစ်မယ့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ်မယုံကြည်တဲ့ ကွန်ယက်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုတဲ့ VPN ကတော့ ယုံကြည်ရဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ့်မှာ VPN သုံးဖို့လိုသလား။ ဘယ်လို VPN ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်သလဲ။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ အတွက် စဉ်းစားစရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်မှာတော့ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုက မိမိအတွက် အသုံး အဝင်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရအောင်ကူညီပေးပြီး VPN ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်သလဲဆိုတာ ညွှန်ပြပေးပါမယ်။
ဒါဆို အခြေခံနဲ့ စလိုက်ရအောင် - VPN တွေက ဘာလုပ်ပေးတာလဲ။
ဒီမိုကရေစီနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စင်တာ (Center for Democracy & Technology) မှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဤရှင်းလင်းချက် မှာ VPN ကိုဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ “မိမိရဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြု လုပ်ဆောင်မှု များကို အပြင်လူတွေ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကြားဖြတ်ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်စေရန် အင်တာနက်ပေါ်မှ လုပ်ဆောင်ချက်အသွားအပြန်ကိစ္စများကို လှိုဏ်ခေါင်းသဖွယ်ဖန်တီးပြီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီလှိုဏ်ခေါင်း ထဲက အသွားအပြန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲပြီး VPN ထံသို့ ပို့ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြားခံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISPs) တွေ၊ အများသုံး Wi-Fi ကို စောင့်ကြည့် နေတဲ့ ဟတ်ကာတွေဟာ VPN အသုံးပြုသူရဲ့ အင်တာနက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ကြားခံလူ တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ VPN ဆီကနေမှတစ်ဆင့် လိုချင်တဲ့နေရာကို အချက်အလက်တွေက ဆက်သွားတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူရဲ့ နဂို IP လိပ်စာ ကို ခြေရာခံဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေကတစ်ဆင့် အသုံးပြုသူရဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံဖို့ ကြိုးပမ်းရင် VPN ကြားခံထားတာကြောင့် မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။”
ရှေ့ဆက်ပြီး VPN တွေ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကို ဆက်မဖတ်ခင် ဒီမိုကရေစီနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စင်တာ (Center for Democracy & Technology) ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အစအဆုံး ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
စဉ်းစားရန် အချက်များ - VPN တွေက ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲ
အင်တာနက်ပေါ်က မိမိရဲ့သတင်းအချက်အလက် အသွားအလာကို အများသုံးကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ စောင့်ကြည့် စုံစမ်းလို့မရအောင် VPN ကကာကွယ်ပေးနိုင်ပေမယ့်လည်း ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်ကို အသုံးပြုနေရင်တော့ အချက် အလက်တွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ မိမိဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ VPN ကိုသုံးနေတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကို ကုမ္ပဏီကွန်ယက်ထိန်းချုပ်သူတွေက မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ အပြင် စီးပွားဖြစ် VPN တစ်ခုကို ဝယ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီဝန်ဆောင်မှုကို ထိန်းချုပ်သူတွေက ကိုယ့်အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကို မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မသမာတဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကတော့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက် တွေနဲ့ အခြားတန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တမင်တကာ စောင့်ကြည့်ရယူခြင်း လုပ်တတ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေ အင်တာနက်သုံးပြီး ပို့ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို အစိုးရနဲ့ ဥပဒေအရာရှိများက ကုမ္ပဏီ VPN ထိန်းချုပ်သူ သို့မဟုတ် အပြင်စီးပွားဖြစ် VPN လုပ်ငန်းတွေဆီကနေ တိုက်ရိုက်တောင်းတာမျိုး လုပ်လာနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေ ကိုပြန်လည်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို VPN ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အစိုးရနဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေထံကို ပေးခွင့်ရှိသလဲ သိအောင်လုပ်ပါ။
ဒါ့အပြင် VPN လုပ်ငန်းက ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသလဲ ဆိုတာကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသတင်းအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင် အဆိုပါနိုင်ငံတွေက ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေတွေက တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူပါဘူး။ အချို့ နိုင်ငံတွေမှာ မိမိရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို မိမိထံအသိပေးခြင်းမပြုဘဲတောင် အစိုးရက ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အဲဒီလိုရယူမှုတွေကို မိမိကပြန်လည်အယူခံဝင်ပြီး ငြင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ VPN လုပ်ငန်း တည်ရှိရာ နိုင်ငံနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကူညီထောက်ပံ့မှု သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိရင် သတင်း အချက်အလက်တောင်းခံလာပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရခြင်း ရှိနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
စီးပွားဖြစ် VPN ဝန်ဆောင်မှုအများစုကို ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ဆိုရင် အကြွေးဝယ်ကဒ်အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေရလေ့ ရှိ ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်မှာ မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ခြေရာခံစေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အသိမပေးလိုတဲ့ အခြားကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အကြွေးဝယ်ကဒ်နံပါတ်ကို VPN ဝန်ဆောင်မှုထံ ပေးမသိလိုလျှင် bitcoin သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ကဒ်နဲ့ ငွေပေးချေမှုလက်ခံတဲ့ VPN ကိုရွေးသုံးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ယာယီ သို့မဟုတ် ကြိုတင်ဖြည့် အကြွေးဝယ်ကဒ်နံပါတ်များ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတိပြုရန်မှာ ခြေရာမခံနိုင်စေမယ့်နည်းနဲ့ ငွေပေးချေရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ IP လိပ်စာကို VPN က သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ IP လိပ်စာကို VPN လုပ်ငန်းဆီ ကနေ လျှို့ဝှက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် VPN နဲ့ချိတ်တဲ့အခါ Tor အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အများသုံး Wi-Fi ကွန်ယက်ကနေ ချိတ်ဆက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး VPN ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
လူတိုင်းမှာ VPN သုံးဖိုလိုတဲ့ ကိစ္စအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ VPN အမျိုးအစားနဲ့ အရည်အသွေးတွေဟာလည်း ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား ကွာခြားမှုအများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး VPN ကို ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များအပေါ် အခြေခံပြီး VPN ဝန်ဆောင်မှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် လို့ရပါတယ်။
VPN ဝန်ဆောင်မှုက သူ့ရဲ့ ကုန်စည်/ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေကြေညာထားသလဲ။ သုံးစွဲသူတွေ ချိတ် ဆက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ အချက်အလက် တွေကို မကောက်ယူပါဘူး (အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်အပိုင်းတွင် ဆက်ဖတ်ပါ) သို့မဟုတ် ကောက်ယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မျှဝေခြင်း၊ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း မပြုပါဘူးလို့ ကြေညာထားပါသလား။ ကြေညာချက်ဟာ အာမခံချက်နဲ့ မတူတာကြောင့် မှန်ကန် ကြောင်း သေချာအောင်စိစစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုက ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို အခြား အပြင်ကုမ္ပဏီတွေဆီ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမပြုလျှင်တောင် အချက်အလက်တွေကို အသုံးချပြီး အခြား မည်သည့်နည်းဖြင့် ငွေရှာတယ်ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါ။ VPN ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက် လုံခြုံမှုမူဝါဒများမှာ အသေးစိတ်ရှာဖွေဖတ်ကြည့်ပါ။
VPN လုပ်ငန်းအနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ပြန်မရောင်းဘူးဆိုရင်တောင်မှ အခြား တစ်နည်းနည်းနဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တည်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုဟာ သုံးစွဲသူတွေ ဆီကလည်း အခကြေးငွေမကောက်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်း ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင် လုပ်သလဲ။ အလှူငွေနဲ့ ရပ်တည်နေသလား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးမော်ဒယ်ကို သိဖို့လိုပါ တယ်။ တစ်ချို့ VPN တွေဟာ “freemium” မော်ဒယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စတင်သုံးစွဲချိန်မှာ အလကားပေးသုံး ပြီး သုံးစွဲမှုအတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်တဲ့အခါ အခကြေးငွေ စတင်ကောက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်မှာငွေကြေးအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီလိုကိစ္စတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ macOS version တွေမှာ drive တစ်ခုလုံးကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖို့ FileVault2အသုံးပြုပါလို့ တိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံ ကာကွယ်ဖို့ ဒီအဆင့်ကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုလိုပါတယ်။ Drive တစ်ခုလုံးကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ရင် အချက်အလက် တွေကို လုံလုံခြုံခြုံ ဖျက်နိုင်သလား၊ မဖျက်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကို စိုးရိမ်ဖို့မလိုတော့ပါ။ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုသောစကားဝှက်သော့ ကြီးကို မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စကားဝှက် နဲ့ကာကွယ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ စကားဝှက်သော့ကြီးကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်းများလုပ်ပြီး drive ပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကို ပြန်ခေါ်မရအောင် လုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ FileVault2သုံးပြီး ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်မှာပါတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို spinning drives အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာတွေပေါ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်များဖျက်ပစ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Spinning drive အစား Solid State Drives (SSDs) အသုံးပြုတဲ့ ခေတ်မီကွန်ပျူတာများ၊ USB သော့များ/ USB thumb drive များ၊ SD ကဒ်များ/ flash memory ကဒ်များအတွက် အသုံးမဝင်ပါ။ USB flash drive များ၊ SD ကဒ်များကဲ့သို့ SSD သုံးတဲ့စနစ်တွေမှာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်း (wear leveling) နည်းပညာကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ပစ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီစနစ်ပေါ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ bit တွေကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုနိုင်ပါဘူး။ (SSD ပေါ်က အချက်အလက်တွေကို ဘာကြောင့် လုံလုံခြုံခြုံ ဖျက်ပစ်ဖို့ခဲယဉ်းကြောင်း ဒီနေရာ မှာ အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)။ တစ်ကယ်လို့ မိမိဟာ SSD ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် USB flash drive အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါက ဤအပိုင်းသို့ကျော်ပြီး ဖတ်ရှုပါ။
ဖိုင်တစ်ခုကိုဖျက်မယ်ဆိုပါစို့။ ဖျက်ချင်တဲ့ဖိုင်ကို စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲ (trash folder) ထဲရွှေ့လိုက်မယ်။ ဖိုင်တွဲကို ရှင်းလင်းဖို့ empty နှိပ်လိုက်မယ်။ ဒါဆို ဖိုင်လုံးဝပျက်သွားပြီးလား။ မပျက်သွားပါဘူး။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိ နေတဲ့ ဖိုင်တွေကို “ဖျက်” လို့မရပါဘူး။ ဖိုင်ဖျက်တယ်ဆိုတာ ဖိုင်ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာမမြင်ရအောင် ခဏ ဖျောက်ပေးလိုက်ရုံသာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခုထပ်သိမ်းလိုတဲ့အချိန်မှသာ ပထမဖိုင်နေရာမှာ ဒုတိယ ဖိုင်နဲ့ ထပ်ရေးပြီး (overwrite) သိမ်းဆည်းပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဖိုင်တစ်ခု ထပ်မရေးခင် အချိန်အထိ “ဖျက်လိုက်တဲ့” ဖိုင်ဟာ disk ပေါ်မှာ ဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခု ထပ်ရေးဖို့ ရက်သတ္တပတ်၊ လ၊ နှစ်နှင့်ချီပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။ ထပ်မရေးနိုင်မီ အချိန်စပ်ကြားမှာ ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်ဟာ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာပေါ် ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာအနည်းငယ် အသုံးချရုံနဲ့ (ဥပမာ “ဖျက်ပစ်ထားသောဖိုင်ကို ပြန်ခေါ်ရန်” ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် သဲလွန်စခွဲခြမ်း ခြေရာခံသည့် နည်းလမ်းများသုံးပြီး) ယင်းဖိုင်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆို ဖိုင်တစ်ခုကို အပြီးသတ်ဖျက်ဆီးဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ။ ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်နေရာမှာ နောက်ထပ်ဖိုင် တစ်ခုနဲ့ ချက်ချင်းအစားထိုးဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းထပ်ရေးလိုက်မှသာ နဂိုဖိုင်ဟာ ကွန်ပျူတာပေါ် ဆက်ရှိမနေတော့ဘဲ ဆော့ဖ်ဝဲသုံးပြီး ပြန်ခေါ်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခု ချက်ချင်းထပ်ရေး ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲက ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်မှာ ပါရှိပြီးသားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲသုံးပြီး ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့ “နေရာလွတ်” မှန်သမျှမှာ ထပ်ရေးဖို့ ဖိုင်အသစ်များဖန်တီးနိုင်တယ်။ အရင်ဖျက်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေ အားလုံးရဲ့နေရာမှာ အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ဖိုင်များနဲ့ ထပ်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အချက်အလက်များ ထာဝရ ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။
macOS ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာဖျက်ခြင်း
OS X ၁၀.၄ ကနေ ၁၀.၁၀ အထိအသုံးပြုတဲ့ စက်တွေမှာ ဖိုင်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ဖို့ဆိုရင် ဖျက်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲ (trash) ထဲ ပြောင်းထည့်ပါ။ ပြီးရင် Finder ကနေ စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲကို လုံခြုံစွာရှင်းလင်းဖို့ Secure Empty Trash (Finder > Secure Empty Trash) ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒါပေမယ့် OS X‌ ၁၀.၁၁ ကစပြီး Secure Empty Trash မပါတော့ပါ။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ် Apple ကွန်ပျူတာတွေဟာ fast flash (SSD) drive အသုံးပြုတဲ့အတွက် အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ဖို့ အာမမခံနိုင်တော့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
OS X ၁၀.၁၁ မှာ အရင်ပုံစံ hard drive ဆက်သုံးတယ်ဆိုရင် အမိန့်ပေးလမ်းကြောင်းပရိုဂရမ် အသုံးပြု တတ်သူတွေက Mac ကွန်ပျူတာရဲ့ srm အမိန့်ပေးမှုသုံးပြီး ဖိုင်ကိုထပ်ရေးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်လမ်းညွှန် ချက်တွေ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ကိုဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
OS X ၁၀.၁၂ မှာ srm မပါတော့သော်လည်း မိမိဘာသာကူးဆွဲပြီးတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ macOS version များမှာ ဖိုင်အသစ်ထပ်ရေးဖို့ rm –P ကိုအသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ ဒီအမိန့်သုံးပြီး ဖိုင်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အကြိမ်များစွာထပ်ရေးနိုင်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ disk ပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက် တွေ ဖျက်ပစ်ဖို့သာ သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ disk မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်နေရာမှာဖြစ်စေ၊ အခြား disk သို့မဟုတ် USB drive ပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ “Time Machine”၊ အီးမေးလ် ဆာဗာ၊ cloud ပေါ် မှာ တင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏အဆက်အသွယ်များကို ပေးပို့ပြီးဖြစ်စေ အရန်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက် တွေကို မဖျက်ပေးနိုင်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ဖို့ဆိုရင် သိမ်းထားသမျှ၊ ပေးပို့ခဲ့သမျှ မိတ္တူဖိုင် အားလုံး ကို လက်စဖျောက် ဖျက်ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် cloud ဝန်ဆောင်မှုတွေ (ဥပမာ Dropbox သို့မဟုတ် အခြားဖိုင်မျှဝေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ) ပေါ်မှာ ဖိုင်များ သိမ်းဆည်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်ရယူခြင်း မပြုနိုင်အောင် အပြီးသတ်ဖျက်ဆီးလို့ ရ၊ မရ အာမမခံနိုင်ပါ။
လုံခြုံတဲ့အချက်အလက်ဖျက်နည်းပညာတွေမှာ နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပြီး ရှိသမျှဖိုင်မိတ္တူအားလုံးကို ဖျက်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဖျက်လိုက် တဲ့ဖိုင်ရဲ့ ခြေရာအချို့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဆက်ကျန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဖိုင်တစ်ခုလုံးပျက်သွားတယ် ဆိုပေမယ့် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ် ရဲ့အချို့အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ ပရိုဂရမ်အချို့ မှာ ဖိုင်သိမ်းဆည်းခဲ့ဖူးကြောင်း မှတ်တမ်း ကျန်ရစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပေမယ့် ဥပမာနှစ်ခု ပေးလိုပါတယ်။ Windows သို့မဟုတ် macOS သုံးကွန်ပျူတာတွေမှာ Microsoft Office သုံးရင် ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်ရဲ့ နာမည်က ‘မကြာသေး မီကဖွင့်ခဲ့သောစာရွက်စာတမ်းများ’ (“Recent Documents”) menu မှာ ဆက်ပေါ်နေနိုင်ပါတယ် (တစ်ခါတစ် လေ ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို Microsoft Office က ယာယီဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ ထပ်သိမ်း ထားတာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်)။ အလားတူ LibreOffice ပရိုဂရမ်ကလည်း Microsoft Office လိုပဲ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖိုင်ကိုလုံခြုံစွာဖျက်လိုက်ပေမယ့် ဖိုင်နာမည်ပါနေတဲ့ ကုဒ်တွေကို သုံးစွဲသူမှတ်တမ်းဖိုင်မှာ ဆက်သိမ်းထားတာမျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Microsoft Office နဲ့ LibreOffice အပြင် တစ်ခြား ပရိုဂရမ်တွေလည်း ဒီလိုဘဲ မှတ်တမ်းချန်တာမျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုင်တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ လုံခြုံတဲ့ နည်းလမ်း နဲ့ ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီဖိုင်ရဲ့အမည်ကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ အချိန်တစ်ခုကြာ ဆက်တွေ့နေနိုင်တယ်လို့ မှတ်ယူပါ။ ဖိုင်နာမည်ပါ ရာနှုန်းပြည့်ပျက်သွားစေဖို့ဆိုရင် disk တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးဖို့နည်းလမ်းသာရှိပါတယ်။ “ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်တစ်ခုရဲ့ မိတ္တူ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ကျန်နေသေးသလားဆိုတာကို disk မှာရှိတဲ့ အချက်အလက် တွေကနေတစ်ဆင့်အတည်ပြုနိုင်လား” လို့မေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်ဝက်ပဲ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ Disk တစ်ခုလုံးကို ရှာရင် အချက်အလက်တွေ plaintext အနေနဲ့ ကျန်၊ မကျန် အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချုံထားတဲ့ပုံစံ၊ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းထားတဲ့ ပုံစံများနဲ့ ကျန်၊ မကျန် မပြောနိုင်ပါ။ ဖိုင်ပါအကြောင်းအရာများ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဆက်လက်ကျန်နိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်းနည်းသော်လည်း ရာနှုန်းပြည့် မသေချာနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဖိုင်မှတ်တမ်းအားလုံး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးစေဖို့ဆိုရင် disk တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးပြီး ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှု စနစ်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းသာ ရှိပါတယ်။
စက်ပစ္စည်း Hardware အဟောင်း စွန့်ပစ်ချိန်တွင် လုံလုံခြုံခြုံ အချက်အလက်ဖျက်နည်း
မသုံးတော့တဲ့ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို လွှတ်ပစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် eBay လို အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကတစ်ဆင့် ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုပါစို့။ ကွန်ပျူတာပေါ် သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ တစ်ခြားသူလက်ထဲ မရောက်သွားနိုင် အောင် အချက်အလက်တွေကို အရင်ဆုံးလုံလုံခြုံခြုံဖျက်ဆီးရပါမယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရကတော့ ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်အများစုက သူတို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပြန်မရောင်းခင်မှာ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို hard drive ပေါ်ကနေ လုံလုံခြုံခြုံ ဖျက်ထားတာမျိုး မရှိတတ်ဘူး။ ဒါဟာအန္တရာယ်များတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာ အဟောင်းတွေကို မစွန့်ပစ်ခင်၊ ပြန်လည်မရောင်းချခင်၊ recycle မလုပ်ခင် အချက်အလက်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နေရာတွေအပေါ်မှာ အခြားအသုံးမဝင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ထပ်ရေးပါ။ ကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေကို ချက်ချင်းမစွန့်ပစ်ဘဲ အိမ်မှာဘဲသိမ်းဆည်းထားမယ်ဆိုရင်တောင်မှ hard drive တစ်ခုလုံးကို အရင်ဖျက်ပစ်ဖို့ (ထပ်ရေးဖို့) အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Darik's Boot and Nuke နည်းပညာကို သုံးနိုင်ပြီး အသုံးပြုနည်း ကို အင်တာ နက်ပေါ်မှာ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အပြည့်အဝ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ချို့မှာ စကားဝှက်သော့ကြီးကို ဖျက်ပစ်နိုင်စွမ်း ရှိတတ်ပါ တယ်။ စကားဝှက်သော့ကြီးကို ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင် hard drive ပေါ်မှာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်း၍သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကို ဘယ်တော့မှ ပြန်ဖြည်ပြီးဖတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုအချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ စကားဝှက်သော့က အရွယ်အစားသေးတဲ့အတွက် ချက်ချင်းဖျက် ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Darik's Boot ၊ Nuke လို ဆော့ဖ်ဝဲတွေသုံးပြီး drive တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးတာထက် အချိန်မြန်မြန်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းက ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားတဲ့ hard drive တွေအတွက်ဘဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အပြည်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို နဂိုကတည်းက မသုံးထားဘူးဆိုရင် drive တစ်ခု လုံးကိုထပ်ရေးခြင်းမှတစ်ပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိပေ။
CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs များကို စွန့်ပစ်ခြင်း
CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs တွေကို စွန့်ပစ်တဲ့အခါ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများ စွန့်ပစ်သလို အရင်ဆုတ်ဖြဲ ဖျက်စီးပြီးမှ စွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဆုတ်ဖြဲဖျက်စီးတဲ့ shredder စက်တွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေမသိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါတဲ့ CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs တွေကို ဘယ်တော့မှ အရင်မဖျက်ဆီးဘဲ မစွန့်ပစ်ပါနဲ့။
Solid-state Disks (SSDs) ၊ USB Flash Drives နှင့် SD ကဒ်များပေါ်ရှိ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ခြင်း
SSDs ၊ USB Flash Drives နှင့် SD ကဒ်များပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီနှင့် နေရာလွတ်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ပစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုအချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ကတော့ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက် disk ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကုဒ်ပြန်မဖြည် နိုင်သရွေ့ အခြားသူတွေ နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ SSD ပေါ်က အချက်အလက် တွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားဖို့ နည်းလမ်းကောင်း ယနေ့ထက်တိုင်မရှိသေးပါ။ ဒီကိစ္စကို ပိုမိုနားလည်လိုရင် အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ။
ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း SSD နဲ့ USB flash drive တွေမှာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်း (wear leveling) နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီစနစ်သုံးတဲ့ disk ပေါ်မှာ နေရာလွတ်တွေကို အကန့်တစ်ကန့်စီ အနေနဲ့ခွဲထားပါတယ်။ ဥပမာ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ စာမျက်နှာတစ်ရွက်စီခွဲထားသလိုမျိုးပေါ့။ ဒီ disk ပေါ်မှာ ဖိုင်တစ်ခု ရေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ရေးလိုက်တဲ့ဖိုင်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကန့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အကန့်တစ်ချို့ (စာမျက်နှာတစ်ခုစီ) မှာ သွားသိမ်းထားလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖိုင်ကို နောက်ဖိုင်တစ်ခုနဲ့ ထပ်ရေးဖို့ဆိုရင် ပထမ ဖိုင် သိမ်းဆည်းထားတဲ့အကန့်ပေါ်မှာ ကွက်တိထပ်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကန့်တစ်ခုတည်းကို ခဏ ခဏ ဖျက်လိုက်၊ ရေးလိုက်လုပ်တာက SSD နဲ့ USB flash drive တွေကို မြန်မြန်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဖျက်လိုက်၊ ရေးလိုက်လုပ်တာ အကြိမ်အရေအတွက်တစ်ခုပြည့်သွားရင် အဲဒီအကန့်က အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး (စာရွက်ပေါ်မှာ ခဲတံနဲ့ ဖျက်လိုက်ရေးလိုက် အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရင် စာရွက်ပေါက်ပြီး ဆက်ရေးမရတော့သလိုမျိုး)။ ဒါကြောင့် drive တစ်ခုလုံး ကြာကြာခံစေဖို့ SSD နဲ့ USB flash drive တွေမှာ အကန့်တစ်ခုတည်းကို အကြိမ် ကြိမ်ထပ်မရေးဘဲ အကန့်အားလုံးမျှအောင် လုပ်ထားပါတယ် (ဒါ့ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကို ဟောင်းနွမ်း ပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်းနည်းလမ်းလို့ ခေါ်တာပါ)။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်နေရာမှာ တစ်ခြားဖိုင်တစ်ခုနဲ့ ထပ်ရေးဖို့ဆိုရင် နဂိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့အကန့်ပေါ် ကွက်တိထပ်မရေးဘဲ တစ်ခြားအကန့် မှာသွားရေးတာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ဥပမာနဲ့ပြောရရင် ပြင်ရေးချင်တဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ မရေးဘဲ တစ်ခြား စာမျက်နှာပေါ် သွားရေးခြင်းနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ထပ်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာက မာတိကာမှာကြည့်ရင် စာမျက်နှာ အသစ်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ disk ရဲ့ အလွန်အဆင့်နိမ့်တဲ့ အီလက်ထရော နစ်များမှာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်က ဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့မှန်း သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိုင်တစ်ခုကို ထပ်ရေးလိုက်ရင် ထပ်ရေးလိုက်တဲ့ဖိုင်က ဖျက်ချင်တဲ့ဖိုင်နေရာမှာ ကွက်တိဝင်သွား အောင် လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် SSD မှာ အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ပစ်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို spinning drives ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို လုံခြုံမှု ရှိစွာ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။ သမရိုးကျ disk drive များအတွက်သာအသုံးဝင်၍ ခေတ်မှီ ကွန်ပျူတာများ၊ USB သော့များ/ USB thumb drive များ၊ SD ကဒ်များ/ flash memory ကဒ်များတွင် အသုံးများသည့် Solid State Drives (SSDs) အတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။ SSD များ၊ USB flash drive များနှင့် SD ကဒ်များကဲ့သို့သော drive များသည် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်း (wear leveling) ဟုခေါ်သည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ယင်းတို့ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသော bit များကို အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ယင်း drive များပေါ်ရှိ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ရန် အလွန် ခဲယဉ်းပါသည်။ (အဘယ်ကြောင့် လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်ဆိုသည့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကို ဤနေရာ တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) အကယ်၍ မိမိအနေဖြင့် SSD သို့မဟုတ် USB flash drive ကို အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက ဤအပိုင်းသို့ကျော်၍ဖတ်ရှုပါ။
ကွန်ပျူတာရှိ ဖိုင်တစ်ခုကို စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ယင်းစွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲကို ရှင်းလင်းလိုက်ရုံမျှဖြင့် ဖိုင်သည် လုံးဝ ပျက်စီးမသွားသည်ကို သိရှိပါသလား။ ကွန်ပျူတာများသည် အများအားဖြင့် ဖိုင်များကို “ဖျက်ပစ်ခြင်း” မပြုလုပ်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုကို စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ချိန်တွင် ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် ယင်းဖိုင်တွဲကို မျက်စိရှေ့မမြင်နိုင်အောင် ဖျောက်ပစ်ရုံသာပြုလုပ်၍ နောင်တစ်ချိန် ယင်းဖိုင်၏နေရာတွင် အခြားဖိုင်တစ်ခု ထပ်ရေးနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့ နဂိုနေရာတွင် နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခုဖြင့် ထပ်ရေးခြင်း ပြီးစီးရန် ရက်၊ လ၊ နှစ်များစွာ ကြာနိုင်သည်။ ထပ်ရေးမှု မပြီးစီးမခြင်း “ဖျက်ပစ်လိုက်သည့်” ဖိုင်သည် သာမာန် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုချိန်တွင် မမြင်နိုင်သော်လည်း disk ပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။ နည်းပညာအနည်း ငယ်အသုံးချရုံမျှဖြင့် (ဥပမာ “ဖျက်ပစ်ထားသည့်ဖိုင်ကို ပြန်ခေါ်သည့်” ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် သဲလွန်စခွဲခြမ်း ခြေရာခံသည့် နည်းလမ်းများ) ယင်း “ဖျက်ပစ်ထားသော” ဖိုင်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒါဆို ဖိုင်တစ်ခုကို လုံးဝဥဿုံဖျက်ပစ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ရှိသလား။ ဖျက်လိုသည့်ဖိုင်နေရာတွင် အခြား ဖိုင်တစ်ခုဖြင့် ချက်ချင်းထပ်ရေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့မှသာ ထပ်မရေးခင် သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်ကို ပြန်လည်ရယူရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ချက်ချင်းထပ်ရေးပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲသည် မိမိကွန်ပျူတာ လည်ပတ်ရေးစနစ်တွင် ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် “လစ်လပ်သွားသော” နေရာတွင်ဖြည့်စွက်ရန် တမင်သီးသန့်ဖန်တီးထားသောအကြောင်းအရာများဖြင့် ထပ်ရေး၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော အချက်အလက်များ အပြီးတိုင်ပျက်စီးသွားစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသို့လုပ်ဆောင်ရန် Windows စနစ်တွင် BleachBit အသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုသည်။ BleachBit သည် Linux နှင့် Windows စနစ်များတွင် လုံခြုံစွာဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ရေးသားထားသော ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့၀ဲလ် တစ်ခုဖြစ်၍ မိမိဖျက်လိုသည့်ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို လုံခြုံစွာဖျက်ပေးခြင်း၊ ဖိုင်များကို အခါအားလျော်စွာဖျက်ပေး ရန်အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းတို့ကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ မိမိနှင့်ကိုက်ညီမည့် ဖိုင်ဖျက်ရန် အစီအစဉ်များ သီးသန့်ရေးသားညွှန်ကြားခြင်းကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာမှာ BleachBit တပ်ဆင်ခြင်း
BleachBit ၏ ကူးဆွဲရန်စာမျက်နှာ မှ installer ကူးဆွဲ၍ Windows တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
BleachBit ၏ installer .exe ဟုရေးထားသော link ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ကူးဆွဲရန်စာမျက်နှာသို့ ရောက်သွားလိမ့် မည်။
Browser အများစုသည် မိမိအနေဖြင့် ဤဖိုင်ကို အမှန်တကယ်ကူးဆွဲလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးလိမ့်မည်။ Microsoft Edge 40 browser ကိုအသုံးပြုပါက မေးခွန်းကို browser ပြတင်းပေါက်အောက်ခြေတွင် အပြာရောင်အနား ကွတ်ထားသည့် လေးထောင့်ကွက်လေးအတွင်း မြင်ရလိမ့်မည်။
မည်သည့် browser အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ဖိုင်ကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အရင်ဦးဆုံး သိမ်းဆည်းသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖိုင်သိမ်းဆည်းရန် “Save” ဟူသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာပေါ်သို့ ကူးဆွဲလိုက်သည့် ဖိုင်များကို Browser အများစုသည် ကူးဆွဲထားသောဖိုင်တွဲ Downloads folder တွင် အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းလေ့ရှိသည်။
Windows Explorer ပြတင်းပေါက်ကို မပိတ်ပစ်ဘဲ BleachBit-2.0-setup ဟုရေးထားသောဖိုင်အပေါ် ခလုတ် နှစ်ချက် နှိပ်ပါ။ ‘သင့်အနေဖြင့် ဤပရိုဂရမ်ကို အမှန်တကယ်တပ်ဆင်လိုပါသလား’ ဟူသော မေးခွန်း ပေါ်လာလိမ့်မည်။ တပ်ဆင်လိုကြောင်း ဖြေကြားရန် “Yes” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
မည်သည့်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုလိုပါသည်ဟု ရွေးချယ်ရန် နောက်ထပ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့် မည်။ မိမိအသုံးပြုလိုသည့် ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်၍ OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ထပ်ပေါ်လာသော ပြတင်းပေါက်တွင် ယေဘုယျအများသုံးလိုင်စင် GNU အကြောင်းဖော်ပြထားလိမ့်မည်။ သဘောတူကြောင်းဖြေကြားရန် “I Agree” ဟူသော ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဆက်လက်၍ BleachBit ပရိုဂရမ်တွင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ အစီအမံများပြောင်းလဲနိုင်သည့် ပြတင်းပေါက်ကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဘာမှမပြောင်းလဲဘဲ နဂိုအစီအမံများအတိုင်းထားရှိနိုင်သော်လည်း Desktop ဘေးတွင် ခြစ်ထားသော အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်ရန် အကြံပြုလိုသည်။ ထို့နောက် ဆက်သွားရန် Next ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် BleachBit ကိုမည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည့်မေးခွန်း တွေ့ရလိမ့် မည်။ တပ်ဆင်ရန် Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ပရိုဂရမ်တပ်ဆင်မှု ပြီးစီးကြောင်းစာသား ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရှေ့ဆက်ရန် Next ခလုတ်ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးပေါ်လာသည့် installer ပြတင်းပေါက်တွင် BleachBit ပရိုဂရမ်စတင်လည်ပတ်လိုသလားဟု မေးလိမ့်မည်။ Run BleachBit ဘေးရှိအမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်၍ တပ်ဆင်မှုပြီးစီးစေရန် Finish ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
BleachBit ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုခြင်း
စတင်ရန် Start menu သို့သွား၍ Windows ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပါ။ Menu တွင် BleachBit ကိုရွေးချယ်ပါ။
BleachBit ကို ဖွင့်လိုကြောင်း အတည်ပြုရန် ပြတင်းပေါက်အသေးလေးတစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဖွင့်လိုကြောင်း အတည်ပြုရန် "Yes" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပင်မ BleachBit ပရိုဂရမ်ပြတင်းပေါက် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ယင်းပြတင်းပေါက်တွင် ကွန်ပျူတာ၌ အများအား ဖြင့်တပ်ဆင်လေ့ရှိသော ပရိုဂရမ်များကို တွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဘာဆက် လုပ်လိုကြောင်း ရွေးချယ်စရာများ ဖော်ပြလိမ့်မည်။
BleachBit ၏ Internet Explorer preset အသုံးပြု၍ Internet Explorer အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ခြေရာများကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ Internet Explorer ဟုရေးထားသော စာသားဘေးရှိ လေးထောင့်ကွက် လေးတွင် အမှန်ခြစ်ပါ။ အောက်ရှိ ကွတ်ကီး၊ ‌ဖောင်ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်း Form history၊ မှတ်တမ်း History နှင့် ယာယီဖိုင်များ Temporary files ဘေးရှိ လေးထောင့်ကွက်များတွင်လည်း တစ်ပြိုင်နက်အမှန်ခြစ်ပြီးသား ဖြစ်သွားကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ချန်ခဲ့လိုသည့်အကွက်များရှိပါက အမှန်ခြစ်ကို ပြန်ဖြုတ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ဖျက်ပစ်ရန် Clean ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
BleachBit သည် မိမိရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်း ဖိုင်များကို ရှင်းလင်းပေး၍ ရှင်းလင်းမှုအခြေအနေကို ဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို လုံခြုံစွာ မည်သို့ဖျက်နိုင်သနည်း။
Menu ဘားတွင် File ကိုနှိပ်၍ ဖိုင်တွဲများကို ဖျက်ရန် Shred Folders ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်အသေးလေး ထပ်ပွင့်လာလျှင် ဖျက်လိုသည့် ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါ။
မိမိရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်များကို အပြီးသတ်ဖျက်ပစ်လိုကြောင်း သေချာစေရန် အတည်ပြုခိုင်းလိမ့်မည်။ Delete ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ အပြီးသတ်ဖျက်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် BleachBit က မိမိဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်များကို ပြလိမ့်မည်။ BleachBit သည် ဖိုင်တွဲအတွင်းရှိ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို လုံခြုံစွာဖျက်၍ နောက်ဆုံးမှ ဖိုင်တွဲတစ်ခုလုံးကို ဖျက်လိမ့်မည်။
ဖိုင်တစ်ခုကို မည်သို့လုံခြုံစွာ ဖျက်နိုင်သနည်း။
Menu ဘားတွင် File ကိုနှိပ်၍ ဖိုင်များကိုဖျက်ရန် Shred Files ကိုရွေးချယ်ပါ။
ရွေးချယ်ရန် ပြတင်းပေါက်တွင် ဖိုင်များပေါ်လာလျှင် ဖျက်လိုသည့်ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ရွေးချယ်လိုက်သည့်ဖိုင်များကို အပြီးသတ်ဖျက်လိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုခိုင်းလိမ့်မည်။ အပြီးဖျက်ရန် Delete ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
BleachBit တွင် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အသုံးဝင်ဆုံးတစ်ခုမှာ လစ်ဟာသွားသည့် နေရာလွတ်များကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်များ၏ သဲလွန်စ ခြေရာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ Linux စနစ်သည် အချက်အလက်သိမ်းဆည်းသည့်နေရာ၌ နေရာလွတ်ကျန်နေသေးလျှင် ဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်မှာ အချက်အလက် အားလုံး သို့မဟုတ် အချို့ကို ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားခြင်း ပြုလေ့ရှိသည်။ နေရာလွတ်များကို ရှင်းလင်းသည့်အခါ ယင်းနေရာများကို နဂိုအတိုင်းမထားခဲ့ဘဲ တမင်ဖန်တီးထားသော အချက်အလက်များဖြင့် ထပ်ရေးလိုက်ခြင်းကြောင့် နဂိုအချက်အလက်များကို လုံးဝဥဿုံ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ Drive ပေါ်တွင် မည်မျှနေရာကျန်နေသေးသည်အပေါ် မူတည်၍ နေရာလွတ်ရှင်းလင်းခြင်းကို အချိန်ယူ၍ လုပ်ဆောင်ရနိုင်သည်။
လုံခြုံသော အချက်အလက်ဖျက်နည်းပညာများ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လမ်းညွှန်ချက်များသည် မိမိအသုံးပြုနေသောကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ disk တွင်သိမ်း ဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ အခြားနေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြား disk သို့မဟုတ် USB drive တွင်ဖြစ်စေ၊ “Time Machine”၊ အီးမေးလ် ဆာဗာ၊ cloud တွင်တင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိအဆက်အသွယ်များကို ပေးပို့၍ဖြစ်စေ အရန်သိမ်းဆည်းထား သောအချက်အလက်များကို ဖျက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုကို လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ရန်ဆိုလျှင် ယင်းဖိုင်၏ မိတ္တူ မှန်သမျှကို ဖျက်ပစ်ရမည်။ သို့သော် cloud ဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ Dropbox သို့မဟုတ် အခြားဖိုင်မျှဝေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ) တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုနိုင်စေရန် အပြီးသတ်ဖျက်၍ ရ၊ မရ အာမမခံနိုင်ပါ။
လုံခြုံသော အချက်အလက်ဖျက်နည်းပညာများတွင် နောက်ထပ်အကန့်အသတ်တစ်ခုလည်း ရှိနေသေးသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် လမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာ၍ ဖိုင်နှင့်မိတ္တူများအားလုံးကို ဖျက်နိုင်ခဲ့လျှင်ပင် ဖျက်လိုက်သောဖိုင်၏ ခြေရာအချို့ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ကျန်ရစ်နေနိုင်သည်။ ဖိုင်ကို အပြီးသတ် ဖျက်လိုက်နိုင်သော်လည်း ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်၏ အချို့အစိတ်အပိုင်းများကဖြစ်စေ၊ အခြားပရိုဂရမ် တစ်ခုက ဖြစ်စေ ယင်းဖိုင်၏မှတ်တမ်းကို ရယူထားနိုင်သည်။
ဤအခြေအနေကို ဥပမာနှစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြလိုသည်။ Windows သို့မဟုတ် macOS စနစ်များတွင် Microsoft Office အသုံးပြုပါက ဖိုင်ကိုဖျက်လိုက်စေကာမူ ယင်းဖိုင်၏အမည်ကို မကြာသေးမီကဖွင့်ခဲ့သောစာရွက် စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းရာ “Recent Documents” menu တွင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် (တစ်ခါ တစ်ရံတွင် Microsoft Office သည် ဖျက်လိုက်သောဖိုင်တွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သောယာယီ ဖိုင်တစ်ခု ထပ်မံကူးယူထားနိုင်သည်)။ LibreOffice ပရိုဂရမ်သည်လည်း Microsoft Office ကဲ့သို့ပင် မှတ်တမ်း များသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး ဖိုင်ဖျက်လိုက်ပြီးသည့်တိုင် ယင်းဖိုင်၏အမည်ပါဝင်သည့် ကုဒ်များကို သုံးစွဲသူ၏ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းဖိုင်တွင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင် ယင်းပရိုဂရမ်နှစ်ခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သည့် အခြားပရိုဂရမ်များ ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ရှိနိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဖိုင်တစ်ခုကို လုံခြုံစွာဖျက်လိုက် နိုင်လျှင်ပင် ယင်းဖိုင်၏အမည်သည် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ကာလတစ်ခုအထိ ဆက်လက်ရှိနေနိုင်သည်။ ဖိုင်အမည် ပါ ရာနှုန်းပြည့် ပျက်သွားစေရန်ဆိုလျှင် disk တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးရန်နည်းလမ်းသာရှိသည်။ မိမိအနေဖြင့် မေးကောင်းမေးနိုင်သည်မှာ “disk ရှိ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေ၍ ဖျက်လိုက်သည့်အချက်အလက်၏ မိတ္တူများ ကျန်ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုနိုင်သလား” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အချို့တစ်ဝက်သာ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ Disk အားရှာဖွေပါက အချက်အလက်သည် plaintext အနေဖြင့် ကျန်ရှိ၊ မရှိ တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ချုံ့ထား သည့်ပုံစံ၊ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားသောပုံစံများဖြင့် ကျန်ရှိ၊ မရှိ မပြောနိုင်ပါ။ ယင်းကဲ့သို့ ရှာဖွေမှုပြုခြင်းသည် ခြေရာမကျန်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုစေလိုသည်။ ဖိုင်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ ဆက်လက်ကျန် ရှိနေနိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးသော်လည်း လုံးဝသေချာသည်မဟုတ်ပါ။ Disk တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေး၍ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ် တပ်ဆင်ခြင်းသည်သာလျှင် ဖိုင်၏မှတ်တမ်းအားလုံးကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စက်ပစ္စည်း Hardware အဟောင်းကို စွန့်ပစ်ချိန်တွင် လုံခြုံသော အချက်အလက်ဖျက်နည်းလမ်း
မိမိအနေဖြင့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို လွှတ်ပစ်မည် သို့မဟုတ် eBay တွင်ပြန်လည်ရောင်းချမည်ဆိုပါက မိမိ၏ အချက်အလက်များကို အခြားသူများ မရယူနိုင်စေရန် ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်များသည် စက်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ရောင်းချချိန်တွင် အရေးကြီးအချက်အလက်များ ပါဝင်သော ၎င်းတို့၏ hard drive များကို များသောအားဖြင့် လုံခြုံစွာဖျက်ထားလေ့မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာအဟောင်းကို ပြန်လည်ရောင်းချမည်၊ ပြန်လည်အသုံးချရန် recycle လုပ်မည်ဆိုပါက အချက် အလက်သိမ်းဆည်းသည့်နေရာများကို အခြားအသုံးမဝင်သောအချက်အလက်များဖြင့် ထပ်ရေးရန် လိုအပ်သည်။ ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့မည့် ကွန်ပျူတာများ၊ သက်တမ်းကုန်သွားသည့် ကွန်ပျူတာများကို ချက်ချင်းမစွန့်ပစ်ဘဲ အိမ်တွင်ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားမည်ဆိုလျှင်တောင်မှ hard drive တစ်ခုလုံးကို အရင် ဖျက်ပစ်ရန် အကြံပြုလိုသည်။ Darik's Boot and Nuke သည် ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန် ထွင်ထားသော နည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ဆိုသည်ကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် (ဤနေရာ တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်)။
အချို့သော အပြည့်အဝ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများတွင် စကားဝှက်သော့ကြီးကို ဖျက်ပစ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ယင်းသို့ဖျက်လိုက်ပါက hard drive တွင် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်း၍သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက် အားလုံးကို ဘယ်သောအခါမှ ပြန်လည်ဖတ်ရှု၍မရနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ စကားဝှက်သော့သည် အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်အတွက် အချိန်စောင့်စရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းလိုလို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Darik's Boot ၊ Nuke စသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများအသုံးပြု၍ drive တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးခြင်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန် နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် hard drive ကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားမှသာ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အပြည်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို နဂိုကတည်းက အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါက drive တစ်ခုလုံးကိုထပ်ရေးခြင်းမှတစ်ပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိပေ။
CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs များကို စွန့်ပစ်သည့်အခါ စာရွက်စာတမ်းများ စွန့်ပစ်သကဲ့သို့ပင် ဆုတ်ဖြဲဖျက်စီး ပြီးမှ စွန့်ပစ်သင့်သည်။ ယခုအခါ ဆုတ်ဖြဲဖျက်စီးသည့် စက်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အခြားသူများမသိသင့်သော အချက်အလက်များပါလျှင် CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs ကို မည်သည့်အခါမျှ နဂို ပုံစံအတိုင်း မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။
Solid-state Disks (SSDs) ၊ USB Flash Drives နှင့် SD ကဒ်များပေါ်ရှိ အချက်အလက်များ ကို လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ခြင်း
SSDs ၊ USB Flash Drives နှင့် SD ကဒ်များပေါ်ရှိ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီနှင့် နေရာလွတ်များကို လုံခြုံစွာဖျက်ပစ်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့ပေါ်ရှိအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကြောင့် disk ပေါ်တွင် ဖိုင်ရှိနေ လျှင်ပင် ကုဒ်ကိုပြန်မဖြည်နိုင်သရွေ့ အခြားသူများ နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ SSD မှ အချက်အလက်များကို လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ရန် နည်းလမ်းကောင်း ယနေ့ထက်တိုင်မရှိသေးပါ။ ဤကိစ္စကို ပိုမိုနားလည်လိုပါက အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း SSD နှင့် USB flash drive များသည် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်း (wear leveling) နည်းပညာအသုံးပြုကြသည်။ ယင်း Disk တစ်ခုချင်းစီပေါ်ရှိ နေရာများကို အကန့်များခွဲထား သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် စာမျက်နှာများ ခွဲထားသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Disk ပေါ်တွင် ဖိုင်တစ်ခု ရေးလိုက်သည် ဆိုပါစို့။ ယင်းဖိုင်ကို သတ်မှတ်ထားသော အကန့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အကန့်အချို့တွင် (စာမျက်နှာ များ) သွား၍ သိမ်းဆည်းလိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဖိုင်ကို ထပ်ရေးလိုပါက disk ပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာအကန့် များကို ထပ်ရေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အကန့်တစ်ခုတည်းကို ဖျက်လိုက်၊ ရေးလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် SSD နှင့် USB flash drive များတွင် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှု ပိုမြန်စေနိုင်သည်။ အကန့်တစ်ခုကို ဖျက်ခြင်း၊ ထပ်ရေး ခြင်း ကြိမ်ဖန်များစွာလုပ်ပါက ပျက်စီးမြန်မည်ဖြစ်သည် (စာရွက်ပေါ်တွင် ခဲတံနှင့် ဖျက်လိုက်ရေးလိုက်လုပ်ပါက တစ်ချိန်ချိန်တွင် စာရွက်ပြဲပြီး ဆက်ရေးမရဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်)။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် SSD နှင့် USB flash drive များသည့် အကန့်များကြား ဖျက်ခြင်း၊ ရေးခြင်း ပြုလုပ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက် မျှစေ ရန်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သို့မှသာ drive တစ်ခုလုံ ပိုမိုကြာရှည်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည် (ထို့ကြောင့် ဤ နည်းလမ်းကို ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်းဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်)။ သို့ရာတွင်ဤနည်းလမ်းကြောင့် ဖိုင် တစ်ခုကို ထပ်ရေးသည့်အခါ နဂိုဖိုင်သိမ်းဆည်းထားသော အကန့်တွင် ဖျက်ခြင်း၊ ထပ်ရေးခြင်း မပြုဘဲ အခြား အကန့်တစ်ခုတွင် သွားရောက်ရေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပြင်ဆင်လိုသည့်စာမျက်နှာတွင် ထပ်ရေးခြင်း မပြုဘဲ အခြားစာမျက်နှာတွင် သွားရောက်ရေးသားခြင်းနှင့် သဏ္ဍာန်တူသည်။ ထပ်ရေးလိုက်သည့် အကြောင်းအရာသည် မာတိကာတွင် စာမျက်နှာအသစ်၌ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်များသည် disk ၏ အလွန်အဆင့်နိမ့်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်များအတွင်း ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်သည် ဤဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိလိုက်မည်ပင် မဟုတ်ချေ။ သို့ရာတွင် ဖိုင်တစ်ခုကို ထပ်ရေးမည်ဆိုပါက ယင်းဖိုင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အကန့်တွင် ထပ်ရေးကြောင်း သေချာစေမည့်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် SSD တွင် အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာဖျက်စီးရန် အလွန်ခက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီလမ်းညွှန်မှာပါတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို spinning drives အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာတွေပေါ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်များ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Spinning drive အစား Solid State Drives (SSDs) အသုံးပြုတဲ့ ခေတ်မီကွန်ပျူတာများ၊ USB သော့များ/ USB thumb drive များ၊ SD ကဒ်များ/ flash memory ကဒ်များအတွက် အသုံးမဝင်ပါ။ USB flash drive များ၊ SD ကဒ်များကဲ့သို့ SSD သုံးတဲ့စနစ်များတွေမှာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုဖြန့်ကျက်ခြင်း (wear leveling) နည်းပညာကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ပစ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီစနစ်ပေါ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ bit တွေကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုနိုင်ပါဘူး။ (SSD ပေါ်က အချက်အလက်တွေကို ဘာကြောင့် လုံလုံခြုံခြုံ ဖျက်ပစ်ဖို့ခဲယဉ်းကြောင်း ဒီနေရာ မှာ အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)။ တစ်ကယ်လို့ မိမိဟာ SSD ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် USB flash drive အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါက ဤအပိုင်းသို့ကျော်ပြီး ဖတ်ရှုပါ။
ဖိုင်တစ်ခုကိုဖျက်မယ်ဆိုပါစို့။ ဖျက်ချင်တဲ့ဖိုင်ကို စွန့်ပစ်ဖိုင်တွဲ (trash folder) ထဲရွှေ့လိုက်မယ်။ ဖိုင်တွဲကို ရှင်းလင်းဖို့ empty နှိပ်လိုက်မယ်။ ဒါဆို ဖိုင်လုံးဝပျက်သွားပြီးလား။ မပျက်သွားပါဘူး။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိ နေတဲ့ ဖိုင်တွေကို “ဖျက်” လို့မရပါဘူး။ ဖိုင်ဖျက်တယ်ဆိုတာ ဖိုင်ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာမမြင်ရအောင် ခဏ ဖျောက်ပေးလိုက်ရုံသာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခုထပ်သိမ်းလိုတဲ့အချိန်မှသာ ပထမဖိုင်နေရာမှာ ဒုတိယ ဖိုင်နဲ့ ထပ်ရေးပြီး (overwrite) သိမ်းဆည်းပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဖိုင်တစ်ခု ထပ်မရေးခင် အချိန်အထိ “ဖျက်လိုက်တဲ့” ဖိုင်ဟာ disk ပေါ်မှာ ဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ဖိုင်တစ်ခု ထပ်ရေးဖို့ ရက်သတ္တပတ်၊ လ၊ နှစ်နှင့်ချီပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။ ထပ်မရေးနိုင်မီ အချိန်စပ်ကြားမှာ ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်ဟာ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာပေါ် ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာအနည်းငယ် အသုံးချရုံနဲ့ (ဥပမာ “ဖျက်ပစ်ထားသောဖိုင်ကို ပြန်ခေါ်ရန်” ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် သဲလွန်စခွဲခြမ်းခြေရာခံသည့် နည်းလမ်းများ သုံးပြီး) ယင်းဖိုင်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Linux စနစ်မှာတော့ ဒီလိုလုပ်ဖို့ BleachBit သုံးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ BleachBit ဟာ Linux နဲ့ Windows စနစ်သုံး ကွန်ပျူတာတွေမှာ ရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖျက်ပစ်ဖို့ တီထွင်ထားတဲ့ အများသုံး (open-source) နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဟာ ကွန်ပျူတာမှာ အလိုအလျောက်ပါလာတဲ့ “ဆုတ်ဖြဲခြင်း” (shred) နည်းလမ်းထက် ပိုအဆင့်မြင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖျက်လိုတဲ့ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို လုံလုံခြုံခြုံ ဖျက်ပစ်ဖို့အပြင် အချက်အလက်တွေကို ပုံမှန်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဖိုင်ဖျက်ဖို့အစီအစဉ်များကို မိမိဘာသာသီးသန့်ရေးသားညွှန်ကြားခြင်းလည်း လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Ubuntu ဆော့ဖ်ဝဲသုံး၍ တပ်ဆင်ခြင်း
Ubuntu Software application ကိုသုံးပြီး Ubuntu ကနေ BleachBit ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက် အက်ပလီကေးရှင်းများ (favorite applications) ထဲရောက်နေပါက ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်း မှာရှိတဲ့ Favorites ဖိုင်ပေါ် ကလစ်နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်ပါက ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိတဲ့ application ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး search field သုံးပြီးရှာဖွေပါ။
Search field မှာ “software” လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Ubuntu Software ပုံပေါ်လာရင် ယင်းပုံကို နှိပ်ပါ။
စာရင်းထဲမှာ BleachBit အလိုအလျောက်ပါလာမှာမဟုတ်ပါ။ BleachBit ဖိုင်ရှာတွေ့ရန် community-maintained packages ကိုအရင်ဖွင့်ရပါမယ်။ Community-maintained packages ဖွင့်ဖို့ ထိပ်ဆုံး menu ပေါ်မှာ “Ubuntu Software” ကိုနှိပ်ပြီး “Software & Updates” ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
အသစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြတင်းပေါက်မှာ “Community-maintained free and open-source software (universe)” စာသားဘေး အမှန်ခြစ်ပါ။ ပြီးလျှင် “Close” နှင့် “Reload” ကိုနှိပ်ပါ။ အမှန်ခြစ်ပြီးသား ဖြစ်နေရင် “Close” တစ်ခုတည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်။.
ဒါဆို Ubuntu Software ထဲမှာ BleachBit ကိုရှာနိုင်ပါပြီ။ ပိုပြီးမြန်မြန်ရှာတွေ့အောင် search field သုံးဖို့ ပြတင်းပေါက်ရဲ့ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ မှန်ဘီလူးပုံကိုနှိပ်ပါ။
Search field ‌ပေါ်လာရင် “BleachBit” လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
BleachBit ပေါ်လာရင် ဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ။ တပ်ဆင်ဖို့ Install ခလုတ်ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
တပ်ဆင်ခွင့်ရဖို့ Ubuntu Software က မိမိရဲ့စကားဝှက် password ကို ‌တောင်းပါလိမ့်မယ်။ စကားဝှက် ရိုက်ထည့်ပြီး Authenticate ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Ubuntu Software Center က BleachBit ကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတပ်ဆင်ပေးပြီး မည်မျှတပ်ဆင်ပြီးစီးကြောင်း ဘားပုံစံဖြင့် ပြပါလိမ့်မယ်။ တပ်ဆင်ခြင်း ပြီးစီးသွားရင် “Launch” နှင့် “Remove” ခလုတ်များ ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
Terminal မှ တပ်ဆင်ခြင်း
Terminal ကိုသုံးပြီးလည်း Ubuntu ပေါ်မှ BleachBit ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင် ဘယ်ဘက် အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ application ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး search field သုံးပြီးရှာဖွေပါ။.
Search field ပေါ်လာရင် “terminal” လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Terminal ပုံကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် “sudo apt-get install bleachbit” လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
BleachBit ကို တပ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက်တပ်ဆင်မှုပြီးစီးပြီဆိုတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တပ်ဆင်မှု ပြီးစီးတဲ့အခါ အစက အမိန့်ပေးလမ်းကြောင်းကို ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Sidebar မှာ BleachBit ပေါင်းထည့်ခြင်း
ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင် ဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိတဲ့ application ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် search field ကိုသုံးပါ။
Search field မှာ “bleach” လို့ရိုက်လိုက်ရင် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ BleachBit နှင့် BleachBit (as root) လို့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
BleachBit (as root) ကို သေသေချချာ အသုံးပြုတတ်မှသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် BleachBit (as root) သုံးပြီး ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်အတွက်လိုတဲ့ ဖိုင်တွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ပြင်မရအောင် ပျက်စီးသွား နိုင်လို့ပါ။
BleachBit ပေါ် ညာကလစ် နှိပ်ပြီး “Add to Favorites” ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ Favorites ကနေ BleachBit ပုံကို နှိပ်ပါ။.
BleachBit ရဲ့ ပင်မပြတင်းပေါက် ပွင့်လာပြီး ရွေးချယ်ရန် preferences များကို ပြသပါလိမ့်မယ်။ ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုနိုင်စေဖို့ ဖိုင်ပါအကြောင်းအရာများအပေါ် ထပ်ရေးခိုင်းရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် “Overwrite contents of files to prevent recovery” ကိုရွေးပြီး အမှန်ခြစ်ထားပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး “Close” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
BleachBit က ကွန်ပျူတာမှာ အများအားဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ရှာဖွေဖော်ပြ ပါလိမ့်မယ်။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဘာလုပ်ချင်သလဲ ရွေးချယ်စရာများလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ချို့က အသုံးပြုပြီးရင် ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းကို ကွန်ပျူတာ ပေါ်ချန်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒီပြဿနာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး အရေးကြီးဥပမာအနေနဲ့ မကြာသေးမီကသုံးပြုခဲ့သော စာရွက်စာတမ်းများ “Recent Documents” နဲ့ web browser မှတ်တမ်း တို့ကို ကြည့်ပါ။ အချို့ဆော့ဖ်ဝဲတွေဟာ မကြာသေးမီက အသုံးပြုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို လိုက်လံမှတ် သားထားတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မကြာသေးခင်က အသုံးပြုထားတဲ့ဖိုင်တွေရဲ့နာမည်တွေဟာ အဲဒီဖိုင်တွေ ဖျက်လိုက်ပြီးချိန်မှာတောင် ကွန်ပျူတာပေါ်မှတ်တမ်းကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ Web browser တွေဟာလည်း လတ်တလော ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာရင်းကို အသေးစိတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ မြန်မြန်ပေါ်လာစေဖို့ ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က စာမျက်နှာများ၊ ပုံများကိုပါ ပုံတူပွား သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပါတယ်။
BleachBit မှာ အဲဒီ မှတ်တမ်းတွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ “preset” များပါပါတယ်။ ဒီ preset တွေကို BleachBit ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများက ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ မှတ်တမ်းတွေက မိမိလုပ်ဆောင်မှုများ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်သလဲဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ဖန်တီးထားတာပါ။ ဒီလမ်းညွှန်မှာ ဥပမာအနေ နဲ့ preset နှစ်ခုအကြောင်း တင်ပြပါမယ်။
System ဘေးရှိ လေးထောင့်ကွက်မှာ အမှန်ခြစ်ပါ။ System အောက်ရှိ အကွက်အားလုံးမှာပါ အမှန်ခြစ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ System အကွက်မှ အမှန်ခြစ်ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး Recent document list နဲ့ Trash ဘေးမှ အကွက်များကို အမှန်ခြစ်ပါ။ ပြီးရင် “Clean” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
BleachBit က တကယ်ဖျက်ချင်ကြောင်း အတည်ပြုခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဖျက်ရန် Delete ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
BleachBit ကဖိုင်အချို့ကို ရှင်းလင်းပြီး ဘယ်လောက်ရှင်းလင်းပြီးကြောင်း ပြပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်အပေါ်ဆုံးက Menu ဘားမှာ File ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်တွဲဖျက်ဆီးဖို့ Shred Folders ကိုနှိပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်အသေးလေး ထပ်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဖျက်လိုတဲ့ ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါ။
မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ဖိုင်များကို ‘အပြီးသတ်ဖျက်ပစ်လိုကြောင်း သေချာသလား’ လို့မေးပါလိမ့်မယ်။ Delete ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး အပြီးသတ်ဖျက်လိုက်ပါ။
ဆက်လက်ပြီး ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်နာမည်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ BleachBit က ဖိုင်တွဲထဲမှာ သိမ်းဆည်း ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို အရင်လုံခြုံစွာဖျက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဖိုင်တွဲတစ်ခုလုံးကို ဖျက်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်အပေါ်ဆုံးက Menu ဘားမှာ File ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုဖျက်ရန် Shred Files ကိုရွေးချယ် ပါ။
ပြတင်းပေါက်အသစ်မှာ ဖိုင်စာရင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဖျက်လိုတဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
BleachBit သုံးပြီး တစ်ခြားကိစ္စတွေလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့ နေရာလွတ် တွေကို ရှင်းလင်းပေးဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ နေရာလွတ်တွေရှင်းလင်းလိုက်မှသာ ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေရဲ့ အစအန အားလုံးကို လက်စဖျောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Linux စနစ်သုံး ကွန်ပျူတာတွေမှာ နေရာလွတ် ကျန်နေရင် ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ အဲဒီနေရာလွတ်တွေမှာ ဆက်သိမ်းထားတာမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် နေရာလွတ်ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းမထားဘဲ ရှင်းလင်းသင့် ပါတယ်။ တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ယင်းနေရာလွတ်တွေပေါ်ထပ်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ယခင် ဖျက်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေ ကျန်ခဲ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် drive ပေါ်မှာနေရာလွတ် အများကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင် နေရာလွတ်ရှင်းလင်းတာ အချိန်အရမ်းကုန်နိုင်ပါတယ်။
အပြည့်အဝ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ချို့မှာ စကားဝှက်သော့ကြီးကို ဖျက်ပစ်နိုင်စွမ်း ရှိတတ်ပါတယ်။ စကားဝှက်သော့ကြီးကို ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင် hard drive ပေါ်မှာ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်း၍သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကို ဘယ်တော့မှ ပြန်ဖြည်ပြီးဖတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုအချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ စကားဝှက်သော့က အရွယ်အစားသေးတဲ့အတွက် ချက်ချင်းဖျက် ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Darik's Boot ၊ Nuke လို ဆော့ဖ်ဝဲတွေသုံးပြီး drive တစ်ခုလုံးကို ထပ်ရေးတာထက် အချိန်မြန်မြန်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းက ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲထားတဲ့ hard drive တွေအတွက်ဘဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အပြည်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို နဂိုကတည်းက မသုံးထားဘူးဆိုရင် drive တစ်ခု လုံးကိုထပ်ရေးခြင်းမှတစ်ပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိပေ။
CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs တွေကို စွန့်ပစ်တဲ့အခါ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများ စွန့်ပစ်သလို အရင်ဆုတ်ဖြဲ ဖျက်စီးပြီးမှ စွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဆုတ်ဖြဲဖျက်စီးတဲ့ shredder စက်တွေကို ဈေးနည်းနည်းနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေမသိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါတဲ့ CD- သို့မဟုတ် DVD-ROMs တွေကို ဘယ်တော့မှ အရင်မဖျက်ဆီးဘဲ မစွန့်ပစ်ပါနဲ့။
သင်အလွယ်တကူအိပ်ကပ်ထဲထည့်ယူသွားနိုင်တဲ့ အိပ်ဆောင်လမ်းညွှန်ကိုဒီနေရာမှာ ကူးဆွဲပါ။ printed, folded, and carried in your pocket.
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ နိုင်ငံသားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ မိမိတို့ရဲ့ အချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိစေဖို့နဲ့ ပေးလိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သက်ဆိုင်သူတွေဆီ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရောက်ရှိစေရေးအတွက် မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ အခိုးခံရခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ အသိမ်းခံရခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖြန့်ဝေတာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ စစ်ဆေးခံရခြင်း၊ အဖမ်းဆီးခံရခြင်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံခြင်းနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများကို ဆက်စပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းစတာတွေကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ခြေရာခံရနိုင်ခြေနှင့် ဖိနှိပ်မှုခံရနိုင်ခြေလည်း ပိုမြင့်ပါတယ်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသူတွေဟာ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ အချက်အလက်များလုံခြုံရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အဆင့်တွေရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်မှာ ဆန္ဒမပြမီ၊ ဆန္ဒပြစဉ်နှင့် ဆန္ဒပြ ပြီးချိန်များတွင် မိမိနှင့် မိမိအချက်အလက်များလုံခြုံမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖတ်ရှုကိုးကားနိုင်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေက ဒေတာလုံခြုံမှုအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အထွေထွေအကြံပြုချက်များသာဖြစ်ပြီး ဥပ‌‌ဒေရေးရာအကြံပြုချက် (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ မပါဝင်ပါ။ တကယ်လို့ ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုင်စင်ရရှေ့နေတစ်ဦးဦးနဲ့ တွေ့ဆုံ‌ဆွေးနွေးပါ။
မိမိ၏ စက်ပစ္စည်းတွင် အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း
အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိစက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးရှိ အချက်အလက်များနှင့် ဖိုင်များကို အပြင်လူများဖတ်ရှုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဝှက်စာပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အချက်အလက်လုံခြုံမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲ ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များပေးပို့လက်ခံခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက် အသုံးပြုတဲ့ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းနဲ့ မတူညီပါ။ အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲသည့် စနစ်ဖြင့် မိမိစက်ပ စ္စည်းအတွင်းသိုလှောင်ထားသည့် စာတိုများကစလို့ ဘရောက်ဇာမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကုဒ်များအထိ အချက်အလက်အားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်စက်ပစ္စည်းကို ပုလိပ်များကသိမ်းဆည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးခြင်း/ခိုးယူခြင်းခံတယ်ဆိုရင် အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်က ဒေတာလုံခြုံမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေက ခန့်မှန်းရခက်တာမို့ ကိုယ့်ဖုန်းကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားသင့်ပါတယ်။
Android နှင့် iOS စက်ပစ္စည်းများမှာ အပြည့်အဝကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ မိုဘိုင်းဖုန်း) တွေရဲ့ အဖွင့်လျှို့ဝှက်ကုဒ်ဟာ စာလုံးရေ ၈ လုံးကနေ ၁၂ လုံးကြားပါဝင်တဲ့ မှတ်မိလွယ်ပြီး ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ကုဒ်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်က ခိုင်မာမှုမရှိရင် လျှို့ဝှက်ကုဒ် ခန့်မှန်းထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်း ကိုသုံးပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းကို အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ iPhone 5s နှင့် နောက်ပိုင်းထွက်ဖုန်းများ မှာအဲဒီလို တိုက်ခိုက်မှုတွေကို
ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စနစ်များထည့်ထားပေမဲ့လည်း ကိုယ့်စက်ပစ္စည်းအတွက် အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးနည်းလမ်းကတော့ ရှုပ်ထွေးပြီးခန့်မှန်းရခက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ကုဒ်တွေအ သုံးပြုတာပါပဲ။
သင့်စက်ပစ္စည်းအတွင်း ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ထည့်သွင်းတဲ့အခါ အပိုဆောင်း သိုလှောင်ရာနေရာများ ဖြစ်သည့် SD (သို့မဟုတ်) မန်မိုရီကဒ်များကို ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲကာအကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အတွက်သီးခြားစနစ်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး တခါတရံမှာတော့ ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် အချက်အလက်ဖိုင်များကို မည်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားသည်ကို ဖိုင်ရှာဖွေသည့် အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် ရှာဖွေခြင်း (သို့မဟုတ်) အပိုဆောင်း သိုလှောင်ထားသည့် အချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများကို ပယ်ဖျက်ထားဖို့ အကြုံပြုပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာအများစုတွင် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် ကင်မရာများမှအပ အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများကို ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ဖြင့် မကာကွယ်နိုင်ဟု မှတ်သားထားပါ။
လက်ဗွေ (သို့မဟုတ်) မျက်နှာ အိုင်ဒီအသုံးပြု၍ သော့ဖွင့်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပါ
လက်ရှိမှာ iOs နှင့် Android အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ လက်ဗွေ (သို့မဟုတ်) မျက်နှာအိုင်ဒီဖြင့် စက်ပစ္စည်းများဖွင့်ခြင်း (ဖြည်ခြင်း) ကို လုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက အသုံးပြုသူအတွက် အတော်လေး သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေပေမဲ့ သင့်အားဖမ်းဆီးသူက သင့်လက်ဗွေ (သို့) မျက်နှာအိုင်ဒီဖြင့် ဖုန်းအား အတင်းအကြပ်ဖွင့်ခိုင်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတာကိုတော့ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဆန္ဒပြမှုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုး (သို့မဟုတ်) အစိုးရက သင့်ဖုန်းပါ အချက်အလက်များမွှေနှောက်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ မည်သည့်အ‌ခြေအနေမျိုးမ ဆို (ဥပမာ-နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ခြင်း) တွင် သင့်ဖုန်းအား ပိတ်ထားလိုက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လက်ဗွေ (သို့) မျက်နှာစကင်ဖတ်ခြင်းစသည့် ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများအသုံးပြု၍ ဖုန်းဖွင့်ခြင်းကြောင့် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ စွပ်စွဲခြင်းခံရသည့်အခါတွင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဖြစ်သည့် Fifth Amendment ကျင့်သုံးမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အမှုစစ်ရဲအရာရှိအနေနဲ့ သင့်ဖုန်းအား ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားဖြင့်ဖြစ်စေ (သို့) မှတ်ထားသည့် လျှို့၀ှက်ကုဒ်ဖြင့် ဖြစ်စေဖွင့်ခိုင်းရန် ဖိအားပေးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ဖုန်းက ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားအသုံးပြုပြီးဖွင့်နိုင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်အား အတင်းအကြပ်အင်အားသုံး၍ ဖုန်းဖွင့်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်ဖုန်းက လျှို့ဝှက်ကုဒ်/စကားဝှက် ဖြင့်သာ ဖွင့်၍ရသည်ဆိုလျှင် အမေရိကန်ဥပဒေကြောင်းအရ ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်အတွက် အခွင့်အရေး သာပါတယ်။ EFF အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများက လူအများ၏ စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်ဖြည်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ဆက်လက်ကန့်ကွက်နေသည့်တိုင် လက်ရှိမှာတော့ မျက်နှာ (သို့) လက်ဗွေအသုံးပြု၍ ဖွင့်ခြင်းအတွက် ဥပဒေအကာအကွယ်သည် စကားဝှက်ကိုသုံး၍ ဖွင့်ခြင်းထက်ပိုမိုလျော့နည်းနေပါတယ်။
iOS စနစ် အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းများတွင် iphone ဗားရှင်းကိုလိုက်၍ Setting မှ Touch ID & Passcode (သို့မဟုတ်) Settings မှ Face ID & Passcode သို့သွားပြီး လက်ဗွေတစ်ခုချင်းစီ ကိုဖျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Reset Face ID ကိုနှိပ်၍ ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများဖြင့် ဖွင့်ခြင်းကို ဖယ်နိုင်ပါတယ်။
Android စနစ်အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် ထုတ်လုပ်သူပေါ်မူတည်၍ ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများဖြင့် ဖွင့်ခြင်းကို ဖယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းကွာခြားသွားပါတယ်။ Pixel စနစ်အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် Settings -> Security -> Pixel Imprint နှင့် လက်ဗွေများကို ပယ်ဖျက်ပါ။
Signal သည် iOS နှင့် Android စနစ်နှစ် မျိုးလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အက်ပ်ဖြစ်ပြီး စာတိုပေးပို့မှုများနှင့် အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုနှစ်ခုလုံးအတွက် ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် အခိုင်အမာပါရှိပါတယ်။ အဲဒီလုံခြုံရေးစနစ်ကို စာပို့နေစဉ်/အသံပို့နေစဉ်အတွင်း မည်သူမျှကြားဖြတ်ပြီး ဖတ်မရအောင်လုပ်ထားသည့် အစ-အဆုံးကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ် (end-to-end encryption) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Signal မှာ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြားအပြန်အလှန်ပေးပို့တဲ့ အချက်အလက်များသာမက အဖွဲ့လိုက် အပြန်အလှန် ပြောဆိုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပေးပို့ထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း အလိုအလျောက်ဖျက်နိုင်တဲ့ စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မိမိဖုန်းအတွင်း အချက်အလက်များပျက်သွားသည့်တိုင် ဆာဗာများတွင်သိမ်းဆည်းထားတတ်သည့် SnapChat လို ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မတူဘဲ signal ကတော့ အချက်အလက်တွေကို မည်သည့်နေရာတွင်မျှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိတာမို့ ပိုမိုလုံခြုံတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ Signal ၏ ဖန်တီးသူများဖြစ်သည့် Open Whisper Systems အား အချက်အလက်များဖွင့်ချရန် အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်အကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ထားသည့် Signal ၏ ဖန်တီးတည်ဆောက်မှု ဒီဇိုင်းပုံစံအရ “အသုံးပြုသူမှ Signal တွင် မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်၊ နေ့စွဲနှင့် Signal ကို နောက်ဆုံးအသုံးပြုသည့် နေ့စွဲ စသည့် အချက်အလက်များ”ကိုသာ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲများမှာ ရိုက်ယူထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကို Signal မှတဆင့် အခြားနေရာမှ မိတ်ဆွေအ ပေါင်းအသင်းများထံသို့ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်ဖုန်းအသိမ်းခံရရင် တောင် သင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ မီဒီယာဖိုင်တွေကို အပေါင်းအသင်းများထံကနေ ပြန်လည်ရ ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်စက်ပစ္စည်းပျောက်ဆုံး/ခိုးယူ/သိမ်းဆည်းခြင်းခံရလျှင် အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် အချက်အလက်များအား လုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာတွင် ပုံတူပွားသိမ်းဆည်းတာကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ခြေရာမခံနိုင်သည့် ဖုန်းကို ဝယ်သုံးပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများအရ ကြိုတင်ငွေပေးချေရသော ဖုန်းဆင်းကဒ်ဝယ်ယူ
ရာတွင် မိမိ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပြသရန်မလိုဘဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် (ပြည်နယ်ဥပဒေများတွင် ကွဲပြားမှုရှိ)။ ဆင်းကဒ်ဝယ်ယူရာတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပါဝင်သည့် မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ အိုင်ဒီကဒ်တမျိုးမျိုးကို ပြသဝယ်ယူရသည့်နိုင်ငံများတွင်မူ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍သင့်ဖုန်းအတွင်းရှိအချက်အလက်များရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ပါက သင့်ဖုန်းအား ဆန္ဒပြသည့်နေရာသို့ ယူဆောင်မသွားပါနှင့်။ ကြိုတင်ငွေပေးချေရသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း ကိုသာ ဝယ်ယူအသုံးပြုပါ။ ဆင်းကဒ်နှင့်ဖုန်းအတွဲလိုက်ကို လက်လီဆိုင်ကြီးများမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိ၏ ယာယီဖုန်းနံပါတ်ကို မိတ်ဆွေများအား အသိပေးပြီး လှုပ်ရှားမှုများကို ချိတ်ဆက်ပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ တည်နေရာကို ၎င်းတို့ချိတ်ဆက်သည့် တာဝါတိုင်များမှတဆင့်သိရှိနိုင်သည် ဖြစ်ရာ မိမိ၏တည်နေရာလုံခြုံမှုအတွက် (အိမ်) မပြန်ခင်ဖုန်းကိုပိတ်ပါ။ GPS ကိုမူ အချက်အလက်များ ထုတ်လွှင့်မှုမရှိသည့်အတွက် စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားရမှာက ဖုန်းထဲတွင် မိမိသွားလာ လှုပ်ရှားသည့် နေရာများ၏ ကိုဩဒီနိတ်များကို မှတ်သားထားတတ်သဖြင့် ဆန္ဒပြသည့်နေရာသို့ မသွားမီ တည်နေရာပြဝန်ဆောင်မှု (location services) ကိုပိတ် ထားပါ။ မိမိပြန်သည့် အချိန်မှ ပြန်ဖွင့် လိုလျှင်ဖွင့်ပါ။ တည်နေရာပြဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ထားသည့်အတွက် မိမိမကျွမ်းကျင်သော နယ်မြေတွင် လမ်းညွှန်မပါဘဲသွားရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိသွားမည့်နေရာရဲ့ မြေပုံကိုကြိုတင်၍
ယာယီဖုန်းအားအသုံးပြုပြီးပါက လုံခြုံသည့်နေရာတွင် သွားရောက်စွန့်ပစ်ခြင်း (သို့) ပြန်လည်အသုံးပြုရန် စွန့်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်သုံးနေကျဖုန်းနဲ့ ယာယီဖုန်းနှစ်ခုလုံးကို အတူတကွတွဲသုံးလျှင် ထိုဖုန်းနှစ်လုံး၏ တည်နေရာများကို ချိတ်ဆက်မိပြီး သင့်လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ကို အထူးသတိပြုပါ။
သင့်အားမည်သူမည်ဝါမခွဲခြားစေနိုင်ရန်နှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန် အဝတ်အစားရွေးချယ် ဝတ်ဆင်ခြင်း
လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများက ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ခေတ်မီစောင့်ကြည့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများက မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။ မိမိအားမည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမခွဲခြား‌စေနိုင်ဖို့နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှကာကွယ်နိုင်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ပြီး အဝတ်အစားကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ရပါမယ်။
အဖွဲ့မှာရှိတဲ့ လူအများအတိုင်း ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ဆန္ဒပြစဉ်အတွင်း မိမိအား မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ် ရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိအားနောက်ယောက်ခံလိုက်ရန်လည်း ခက်ခဲစေ နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါ သင့်အားရုပ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ သင့်အပေါင်းအပါများကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ ခက်သွားပါတယ်။ အရောင်ခပ်ရင့်ရင့်ဗြောင်အထည်တွေက အခြားသူတွေနဲ့ ရောနှောသွားစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲဒီလိုဝတ်ဆင်တဲ့အခါ ကားပေါ်ကနေ အလွယ်တကူမမြင်နိုင်တာမို့ လမ်းဖြတ် ကူးချိန်နှင့် ကားအသွားအလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ အထူးဂရုစိုက်သွားလာပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင် အဝတ်အစားအပိုတစ်စုံဆောင်ထားပါ။ ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်း ငရုတ်ကောင်းရေမှုန် (သို့မဟုတ်) မျက်ရည်ယိုဗုံးများနှင့် ကြုံတွေ့ပါက သင့်အပြန်လမ်းတွင် အဝတ်အစားအသစ်တစ်စုံ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှု/ သက်သောင့်သက်သာမရှိမှုများကို လျော့နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
မိမိအား မည်သူမည်ဝါဟု ထင်ရှားစေသည့် အမှတ်အသားများအား ဖုံးကွယ်ခြင်း
သင့်ကို အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသား (ဥပမာ- တက်တူး (သို့မဟုတ်) ဆံပင်အရောင်များ) ရှိနေပါက ၎င်းတို့ကို ဖုံးကွယ်ထားပါ။ တက်တူးရှာဖွေတဲ့စနစ်နဲ့ သင့်ကို ‌ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ဦးထုပ်အရောင်ရင့်များ၊ လည်စည်းပဝါများ ၊လက်အိတ်များ၊ လက်ရှည်များနှင့် တကိုယ်လုံးဖုံးသည့် အဝတ်များက ထိုဝိသေသများကို ဖုံးကွယ်ရန် နဲ့ လူကြားထဲတွင် ရောနှောသွားစေဖို့ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လေမှတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်နည်းပညာသုံး၍ မိမိမျက်နှာအားရှာဖွေခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းနှင့် ဓါတ်ပုံများတွင် မိမိအား ရှာဖွေမရနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးများရစေပါတယ်။ မျက်စိကာကွယ်သည့်မျက်မှန်ကြီးများတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် မိမိမျက်စိအတွင်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအရာများမဝင်အောင်တားဆီးနိုင်ပြီး စောင့်ကြည်နည်းပညာဖြင့် မိမိမျက်နှာအားရှာဖွေသည့်စနစ်ကို အတော်အသင့်ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။ လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ခြင်းက လက်အရေပြားကို အန္တရာယ်‌ဖြစ်စေသည့်အရာများ ထိတွေ့မှုနှင့်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက အချို့လက်အိတ်တွေက ဖုန်းကောင်းကောင်းသုံးလို့မရစေပါဘူး။ အချိန်ကြာကြာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီး အကြမ်းခံသော ဖိနပ်များဝတ်ဆင်ပါ။
ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်း လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ
ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးရာတွင် မိမိဖုန်းသော့ကိုမဖွင့်ဘဲ ရိုက်ကူးပါ
အားပါသောရုပ်ပုံများ ရိုက်ကူးရန်အတွက် အချိန်တိုင်းအသင့်ဖြစ်နေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက် အခေါက်တိုင်း ဖုန်းရဲ့လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ဖွင့်နေရရင် အချိန်ကောင်းလွတ်သွားတဲ့ အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းတာတစ်ခုက iOS နှင့် Android ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ ဖုန်းကိုသော့မဖွင့်ဘဲ ကင်မရာရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်တာပါ။
ကင်မရာရိုက်ရန် Android Pixel စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်းများအတွက် ပါဝါခလုတ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
iOS ဖုန်းများတွင် ကင်မရာပုံကို ခပ်ကြာကြာဖိထားလိုက်ပါ။ iOS စနစ်သုံး ဖုန်းအဟောင်းများတွင် ခလုတ်ကို အခြားတဘက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ။
မိမိရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများတွင် ပါဝင်နေသည့် အခြားဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ဂရုစိုက်ပါ
အကယ်၍သင့်ဓါတ်ပုံဗီဒီယိုများတွင် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူများပါဝင်နေပါက မည်သည့်ပုံကို ဖြန့်ဝေမည်ဆိုသည်ကို အလေးပေးစဉ်းစားပါ။ သင့်ပုံတွင် အခြားသူများ၏ မျက်နှာများပါဝင်နေပါက ထိုသူများကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကသော်လည်းကောင်း၊ အခြားစိတ်ဝင်စားသူများကသော်လည်းကောင်း လိုက်လံရှာ ဖွေဖမ်းဆီးခြင်း၊ အရှက်ခွဲစွပ်စွဲခြင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မျက်နှာများကို ဝေဝါးသွားစေရန် ဓါတ်ပုံပြင်ဆင်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းများသုံးပြီး ပုံကိုပြင်ပြီးမှ ဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာများ သာမက ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသားများ (ဥပမာ- တက်တူးများ၊ ထင်ရှားသည့်အဝတ်အစားများ) တို့ကို ဝေဝါးစေခြင်း၊ အမဲရောင်ဖြင့် ဖျက်ထားခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ Android စနစ်အတွက် The Guardian Project ၏ ObscuraCam app ကိုသုံးလျှင် မျက်နှာများကို အလိုအလျောက် ဝေဝါးသွားစေပါသည်။ iOS စနစ်သုံး စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် အိမ်သုံးကွန်ပြူတာများအတွက် Image Scrubber ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာအချက်အလက်အကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များအား
ဓါတ်ပုံဖိုင်များတွင် ပါဝင်သည့် ရိုက်ကူးသူ/ ရိုက်ကူးသည့် ဖုန်းစသည့်အချက်အလက်များကို ခြေရာခံနိုင်သည့် အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်ပြီးမှ ဓါတ်ပုံများကို ဖြန့်ဝေပါ။ ဓါတ်ပုံဖိုင်များတွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် ကင်မရာမျိုးအစား၊ ရိုက်ကူးသည့်နေရာ၊အချိန် အပါအဝင် သင့်နာမည်တို့ကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ၁။ မူလဓါတ်ပုံကို ဒက်စ်တော့ကွန်ပြူတာပေါ်သို့တင်ပြီး စခရင်ရှော့ ရိုက်ယူလိုက်တာနဲ့ အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မူလဓါတ်ပုံအစား ထိုစခရင်ရှော့ကို တင်ပါ။
ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ၂။ စခရင်ရှော့ကို သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ပင် ရိုက်ယူပြီး အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းပြသည့် အချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါ။ မူလဓါတ်ပုံအစား ထိုစခရင်ရှော့ကို တင်ပါ။
ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ၃။ သင့်ဓါတ်ပုံကို Signal အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်ပို့ပြီး ကူးဆွဲကာ ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။
ကားလိုင်စင်နံပါတ်တွေကို Automated License Plate Reader Systems (ALPRs) စနစ်နဲ့ ရှာဖွေပြီး ကားဖြတ်သွားတဲ့ နေရာ၊ အချိန်၊ နေ့စွဲအတိအကျကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ နည်းပညာကို အမေရိကနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအတော်များများတွင် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ (ဥပမာ Vigilant နှင့် MVTrac ) တို့မှ တဆင့် အချက်အလက်မျှဝေတဲ့ပုံစံနဲ့ အသုံးပြု ကြပါတယ်။ စနစ်အတွင်း ကားလိုင်စင် အချက်အလက်များကိုအချိန်ကြာရှည်စွာ သိုလှောင်ထားတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ကားလိုင်စင်အချက်အလက်များကို အချိန်ကြာသိုလှောင်ခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေများနှင့် ALPRs များကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေများပြဌာန်းခြင်းမပြုနိုင်စေဖို့အတွက်လည်း ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အတိုပြောရလျှင် ကားလိုင်စင်နံပါတ်ကို ခြေရာခံသည့်စနစ်ကိုသုံးပြီး သင်သွားရာနေရာများကို အလွယ်တကူ ခြေရာခံနိုင်သလို ဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပေးနိုင်မှုလည်း မရှိသလောက်နည်းပါးတာကို သတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Street Level Surveillance guide on ALPRs တွင်ဖတ်ရှုပါ။
ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမည့်နေရာများသို့ အသွား၊ အပြန်ခရီးများတွင် အထူးသတိပြုဂရုစိုက်ပါ။ သင့်နာမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ငွေချေကဒ်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်များကို အသုံးပြုပြီး သွားလာမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ အခြားသယ်ယူပို့ဆောင် ရေးနည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ စက်ဘီးစီးပြီး (သို့မဟုတ်) လမ်းလျှောက်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားရင်တော့ ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ခံရတာကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လေယာဉ်ပျံစီးချိန်ဖုန်းပိတ်သည့်ခလုတ် (Airplane mode) ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် မိမိရောက်ရှိရာ နေရာပြတဲ့ အချက်အလက်များကို ဖုန်းမှလွှင့်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ သင့်အပေါင်းအသင်းများထံသို့ ဖုန်းအသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အပေါင်းအသင်းများနှင့်ကွဲသွားလျှင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်မည့်ဆုံရပ်ကို ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီ အချိန်းအချက်သေချာလုပ်ထားပါ။ အရှေ့မှာပြောထားသလို ဖုန်းမှာပါတဲ့ နေရာပြဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဆန္ဒပြပွဲမှ မပြန်မီအချိန်အထိ ပိတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အချို့သော လမ်းညွှန်အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို အင်တာနက်မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ GPS စနစ်ဟာ အချက်အလက်ကိုလက်ခံတဲ့ စနစ်မျှသာဖြစ်သည့်အတွက် လေယာဉ်ပျံစီးချိန်ဖုန်းပိတ် သည့်ခလုတ်ကိုမပိတ်မီ GPS ကိုဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြရာနေရာ‌ဒေသ၏ ‌မြေပုံကိုလည်း ဒေါင်းလုတ်ကြိုဆွဲထားရန် မမေ့ပါနှင့်။
သင့်အားရဲမှဖမ်းဆီးသွားလျှင် ရှေ့နေမပါလျှင် စကားမပြောဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်သည့် အခွင့်အရေး သင့်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် “ရှေ့နေခေါ်ပေးပါ၊ ရှေ့နေမပါဘဲစကားမပြောပါ၊” လို့ တောင်းဆိုပြီး မေးခွန်းတွေးမေးတာကို ရှောင်လွှဲလို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ကမေးခွန်းများကိုဖြေမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရင်တော့ အမှန်အတိုင်းထွက်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးပါ။ စစ်မေးတဲ့ ရဲအရာရှိကို လိမ်လည်ဖြေဆိုခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုမြောက််တဲ့အတွက် မူလစစ်မေးသည့်ကိစ္စထက်ပင် လိမ်လည်‌ဖြေဆိုမှုက အမှုပိုကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍သင့်ဖုန်းကိုဖွင့်ခိုင်းလျှင် ဖုန်းအားစစ်ဆေးရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုချက်မပေးကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းအား အတင်းအကြပ်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဖွင့်ရန် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကိုတောင်းခံလာပါက (သို့) ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးရန် ပြောဆိုပါက သင့်အနေဖြင့် ငြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ဖုန်းအသိမ်းခံရခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ကုဒ် (သို့) ခန္ဓာဗေဒ အချက်အလက်များသုံး၍ ဖုန်းဖွင့်ပေးရန် ငြင်းဆန်သည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဖမ်းဆီးခံရသည့် အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး အကျိုးဆက်တွေ မတူတာမို့ သင့်အပေါ်ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ပုံစံအပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါကြည့်ပြီး လှုပ်ရှားပါ။
ဆန္ဒပြပြီးနောက် လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ
သင့်စက်ပစ္စည်းအသိမ်းဆည်းခံရလျှင် ဥပဒေကြောင်းအရ လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိရန် လုပ်ဆောင် နိုင်ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် သင့်ရှေ့နေမှ အမှုမစစ်မီအချိန်တွင် “ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပြန်လည်ရယူလိုမှု” အဆိုကိုတင်သွင်း နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏အီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းအတွင်း သက်သေခံအချက်အလက်များရှိသည်ဟု ရဲများမှယူဆပါက သက်သေအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပယ်ဖျက်ပြီး သက်သေခံပစ္စည်း အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းအား မတရားထိန်းသိမ်းခံရခြင်း ပုဒ်မဖြင့်ဦးတိုက် လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်း ရှိပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ဘဲ ချိတ်ဆက်မှုကို ဖျက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Twitter နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကိုရပ်ရန် Settings and privacy -> Apps and devices ကိုသွားပြီ းသင့်စက်ပစ္စည်းနှင့် သင့် Twitter ‌အ‌ကောင့်တို့အကြား ချိတ်ဆက်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင်၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (သို့) လျှို့၀ှက်စာသားပြောင်းခြင်းဖြင့် အကောင့်မှ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်အား ဥပဒေအရဆောင်ရွက်မှုများကို နှောင့်နှေးစေမှု (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းအားဖျောက်ဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတာကို သတိပြုပါ။ သင့်အနေဖြင့် မည်သို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို ရှေ့နေနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများက သင့်၏ အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုမှုအဝင်/အထွက်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အကောင့် လုံခြုံရေးကိုသံသယရှိရင် အဲဒီအချက်အလက်တွေကို တောင်းယူစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ တယ်။ အကယ်၍ သင့်ဖုန်းအားလုံခြုံရေးအဖွဲ့များ၏ သိမ်းယူခြင်းခံရပါက Cellebrite ကဲ့သို့သော မှုခင်း‌ဖြေရှင်းရေး ဆောဖ့်ဝဲလ်များကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းအတွင်းထည့်သိမ်းထားသမျှ အချက်အလက်များ (ဥပမာ ဓါတ်ပုံများ၊ ဖုန်းစာအုပ်၊ စာတိုများနှင့် မိမိသွားထားသည့်နေရာများ) ကို မွှေနှောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းက မော်ဒယ်အဟောင်းဖြစ်လျှင် (သို့မဟုတ်) ကုဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲထားခြင်းမလုပ်ဆောင်ထားဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုက အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိဖုန်းအတွင်း အချက်အလက် သိုလှောင်ထားရှိမှုကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ထားခြင်း၊ ခိုင်မာသည့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်အောင် ထားခြင်းကသာ ဆန္ဒပြပွဲကဲ့သို့ စွန့်စားရသည့် အခြေအနေမျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။